Imigomo Yokusebenzisa - Buka i-Rapport
© Copyright Buka i-Rapport | Okuqukethwe yila makhasi kuvikelwe i-copyright.
Sicela ufunde lokhu ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa isiza sethu, izinsizakalo, izinhlelo zokusebenza, amawijethi noma ukuthumela noma ukuthengwa kwempahla ("Izinsizakalo"). Lesi yisivumelwano esibophezela ngokusemthethweni phakathi kwakho neWatch Rapport. NGOKUSEBENZISA IMISEBENZI, WAMUKELA YONKE IMIBANDELA YALE MIGOMO YOKUSETSHENZISWA (KANYE NOMA YIYIPHI IMIGOMO ETHENGISELWE LAPHA) FUTHI USIMELE KITHI UKUTHI UNGOKWENZA NGOKOMTHETHO UKUNGENA NOKUVUMELANA NEMIGOMO YOKUSETSHENZISWA. UMA UNGAYAMUKELI LE MIGOMO YOKUSETSHENZISWA, NGOKE UNGAGUNYAZIWE UKUSEBENZISA YONKE YEMISEBENZI YOKUBUKA.
Ngokwemigomo yokusetshenziswa ebekwe ngezansi ("Imigomo Yokusebenzisa"), amagama athi “wena” kanye no “wakho” abhekisa, njengoba kusebenza, (i) umuntu noma abantu abathumela iwashi noma enye into noma izinto eziqukethe igolide, iplatinamu, isiliva, i-titanium, ezinye izinsimbi eziyigugu, amatshe ayigugu (afaka kodwa angagcini ngamadayimane, amarubi, amasafire nama-emeraldi), noma iyiphi inhlanganisela yalokho (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi "Okuthengiswayo") kuWatch Rapport, LLC ("Buka iReportport") ukuthengisela, nokuthengwa yi-Watch Rapport, (ii) umuntu noma abantu abathenga iwashi noma enye into ethengiswayo evela ku-Watch Rapport, (ukuthengiselana ngakunye kokuthengiswayo noma kokuthengisa okubizwa ngokuthi “Umsebenzi”) noma (iii) umuntu noma abantu abasebenzisa i-watchrapport.com (i- “Site”). “Thina,” “wethu,” futhi “nathi” kubhekisa kubabukeli be-Watch Rapport futhi babela.
Le Migomo Yokusetshenziswa ibophezela kuwo wonke amakhasimende e-Watch Rapport futhi izosebenza kukho konke ukusebenzisana kwebhizinisi phakathi kwakho ne-Watch Rapport, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ekusebenziseni kwakho iSayithi, iTransekshini, kanye nanoma yimiphi eminye imisebenzi oyinikezwe yi-Watch Rapport , kufaka phakathi ukusetshenziswa kwepulatifomu eku-inthanethi Shopify lapho leli Sayithi liphethwe khona. Ngalokhu wenza izethulo neziqinisekiso ku-Watch Rapport (kungakhathalekile ukuthi okwenziwayo kuqediwe yini nokuthi ngabe i-Watch Rapport ingumthengi noma umthengisi we-Merchandise) futhi uvumelana nemigomo nemibandela, esimweni ngasinye njengoba kubekiwe kwimigomo yokusetshenziswa, ngokusebenzisa kwakho iSayithi kanye / noma ngokuthumela Okuthengiswayo noma ukuthola Okuthengiswayo okuvela ku-Watch Rapport.
Le Migomo Yokusetshenziswa ifaka phakathi (I) UMBANDELELO WOKUJABULA, (II) UKUHLULELWA KWAMALUNGELO OKUTHOLA ISENZO SEZINGA NGOKWETHU, KANYE (III) ukukhululwa kwakho kuzo zonke izimangalo zomonakalo ongase uvele ngenxa yokusebenzisa kwakho Izinsizakalo. Ngokusebenzisa noma iyiphi yalezi ZINSIZAKALO, uyavumelana nale mibandela.
Imigomo Esebenza Ekuthengweni Kwentengo NGOKUBUKA RAPPORT.
Le migomo nemibandela elandelayo ilawula noma yikuphi Okwenziwayo okuphathelene nokuthengwa, noma ukuzama ukuthengwa, kokuthengiswayo yi-Watch Rapport.
Uma uzama ukuthengisa Okuthengiswayo, ngalokhu umelela futhi uqinisekisa i-Watch Rapport ukuthi (i) uneminyaka okungenani eyishumi nesishiyagalombili (18) ubudala; (ii) unesihloko esihle futhi esingamaketha se-Merchandise; (iii) unegunya eligcwele lokuthengisa, ukudlulisa, nokudlulisa okuthengiswayo; (iv) ungumnikazi osemthethweni futhi olinganayo wanoma yikuphi futhi konke okuthengiswayo okunikelwe ukuthi kuthengiselwe iWatch Rapport; (v) uzenzela wena, hhayi njenge-ejenti yomunye noma omele omunye; (vi) Okuthengiswayo kuthengiswa mahhala kuzo zonke izibambiso, ukuhlangana, izikweletu, nezimangalo eziphikisayo zanoma yiluphi uhlobo nencazelo nganoma yini; (vii) NGEKE uthumele izinto eziqukethe okulandelayo: i-arsenic, i-beryllium, i-bismuth, i-cadmium, i-mercury, i-nickel, i-lead, i-antimony, i-selenium, i-tin, i-tellurium noma enye into enobungozi, enobuthi noma enobuthi; (viii) Okuthengiswayo akuveli, noma umphumela, wezenzo ezingekho emthethweni, kufaka phakathi ukweba noma ukukhwabanisa; (ix) noma ikuphi ukuthengiselana okuqaliswe nguwe ngeke kubangele ukuthi iWatch Rapport yephule noma yimuphi umthetho olwa nokushushumbiswa kwemali, ukulwa nobushokobezi, noma omunye umthetho osebenzayo wombuso noma we-United States of America noma yimuphi umbuso noma izwe langaphandle; futhi (x) i-Watch Rapport iyaligodla ilungelo futhi uyavuma ukunikeza imibhalo eyengeziwe kanye / noma imininingwane ephathelene nawe kanye / noma yikuphi okuthengiswayo, kufaka phakathi yonke imibhalo noma imininingwane edingekayo ukuze i-Watch Rapport ithobele umthetho wendawo, wezwe nowesifundazwe (okubandakanya Buka i-Rapport ibika konke okuthengiswayo okutholwe kuziphathimandla ezifanele njengoba kudingwa umthetho osebenzayo.)
Kuchazwa Okuthengiswayo Kwakho.
Ngalokhu uyavuma ukuthi noma iyiphi incazelo yokuthengiswayo osinikeza yona, noma ngabe kusefomini yohlu, isiliphu sokupakisha esifakwe ezintweni zokuthumela noma kungenjalo, kuzoba yiqiniso, kuphelele, futhi kunembe ngesikhathi usithumela leyo ncazelo. Uma sinquma, ngokubona kwethu kuphela, ukuthi kunokungafani okukhulu phakathi Kokuthengiswayo njengoba kuchazwe nguwe Nentengiso esiyitholayo, noma uma kungekho ncazelo Yokuthengiswayo efakiwe kuphakheji oyisebenzisile ukuthumela Okuthengiswayo, singamisa noma unqamule ukuthengiselana ngaphandle kokukwazisa. Ngeke silungise noma sibuyisele noma yimaphi amawashi afanayo noma ngabe umonakalo wenzeke ngesikhathi senqubo yethu yokuhlola nokulinganisa okujwayelekile. Ngaphandle kwanoma yini kule Migomo Yokusetshenziswa ngokuphambene, esimweni lapho siyanqamula Okwenziwayo ngoba Okuthengiswayo okuthunyelwa nguwe kunqunywa yi-Watch Rapport, ngokubona kwethu kuphela, ukuthi kube nenombolo ye-serial eshintshiwe / ethathiwe noma yokuba ngomgunyathi noma ikhophi eliwumfanekiso, sizokwazisa ngokubhala (okungafaka isaziso nge-imeyili, umyalezo wombhalo, noma ezinye izindlela ze-elekthronikhi) futhi sizokuthumela Impahla yakho kuwe, ngezindleko zakho, kungakapheli izinsuku zebhizinisi eziyi-5 sitholile imiyalo yakho yokuthumela futhi ukukhokha ngakho-ke (uma inombolo ye-akhawunti evumelekile nomthumeli oqokiwe inganikezwanga); kodwa-ke, uma uvuma ukuthi i-Watch Rapport ingalahla okuthengiswayo uma singatholi imiyalo yokuthumela kanye nenkokhelo yazo zonke izindleko zokuthumela ezivela kuwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku i-Watch Rapport ekuthumele ngalo isaziso esibhaliwe sokuthi okwenziwayo kuthunyelwe inqanyuliwe. Uma kwenzeka ukuthi i-Watch Rapport inqamule ukuthengiselana ngenxa yanoma yikuphi ukwephula izethulo neziqinisekiso ezenziwe nguwe mayelana nencazelo yakho Yokuthengiswayo, i-Watch Rapport izothumela Impahla yakho kuwe kungakapheli izinsuku zebhizinisi eziyi-10 ngezindleko zethu ngumthumeli womkhumbi indlela yokukhetha kwethu, futhi uyavuma ukuthi sizoba nesibopho sokuqinisekisa kuphela inani lempahla yakho kufika ku- $ 100.00.
Ukuthumela Kwangaphakathi; Izindleko; Ukulahlekelwa noma Isiqinisekiso Somonakalo.
Uma i-Watch Rapport ifisa ukuthola Impahla yakho ukuze ihlolwe ngokuqhubekayo singakunikeza ilebula lokuthumela; kodwa-ke, iWatch Rapport ayibophezelekile ukukunikeza ilebula lokuthumela. Uma usithumela Okuthengiswayo usebenzisa ilebula lokuthumela esilinikezayo, sizothenga umshuwalense ukumboza Okuthengiswayo kwakho uma kwenzeka kulahleka konakele ngenani lemali lesilinganiso sakho, uma selicutshungulwe yikhuriya likazwelonke elikhethwe yithi ukuthumela kwakho Okuthengiswayo (the “Shipper”). Lapho iwashi lakho selitholakele, lizohlala linomshwalense wenani lesilinganiso sakho semali. Uma kwenzeka ukuthi iphakethe lakho lilahlekile sizodinga ukuthi unikeze ubufakazi bokwamukela irisidi, unikeze irisidi lobufakazi bokuthi izimpahla zilahlekile, bese ufaka isimangalo kungakapheli izinsuku ezingama-30 zilahlekile. Uma kwenzeka iphakethe lakho lonakele sizodinga ukuthi wena: unikeze ubufakazi bokutholwa kokuthunyelwa, unikeze irisidi yobufakazi bokuthi izimpahla zonakele, ukhombise ukuthi iphakethe alilimazanga ngaphambi kokuthunyelwa, bese ufaka isimangalo ezinsukwini ezingama-30 zokulahleka. Uma ukholwa ukuthi udinga ukumbozwa okwengeziwe, kungumsebenzi wakho ukuxhumana nathi ukuze sikwazi ukuhlinzeka ngaleyo ndlela eyengeziwe ngezindleko zethu ngaphambi kokusithumela Impahla yakho. Ungaxhumana nathi ngocingo ku- (800) 571- 7765 ukuhlela ukuthola okunye ukwaziswa noma ngemiyalo yokuthumela. Okokuthengiswayo okuthunyelwa kusuka kumandla angaphandle kwase-US noma ezindaweni zase-US ezidinga ukungeniswa e-US, uzoba nesibopho sazo zonke izindleko ezihambisana nokuthunyelwa okuphephile kweMpahla yakho. Kodwa-ke, uma sivuma ngokubhala ukukhokhela ukuthunyelwa kwakho, kuzonikezwa ilebula lokuthumela, futhi sizokhokhela izindleko zalokho kuthunyelwa, kufaka phakathi imisebenzi, i-VAT, njll. Unesibopho sokugcina yonke imithetho efanelekile yokuthekelisa nokungenisa nemikhawulo. Uma i-Watch Rapport ithola Okuthengiswayo kwakho, ikunikeza ukuthi uthenge Okuthengiswayo okunjalo, futhi wenqaba okunikezwayo okunjalo, kungakhathalekile ukuthi ngubani okhokhe ukuze ithunyelwe ku-Watch Rapport, kuzoba yisibopho sakho ukuhlela nokukhokhela ukuthunyelwa okudingekayo ukuze kubuyiswe Okuthengiswayo. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, uzobhekana nengozi yokulahleka maqondana nakho konke okuthengiswayo kuze kube yilapho lokho kuthengiswa kutholakele empeleni yi-Watch Rapport.
Sirekhoda ukuvulwa nokuqukethwe kwephakeji ngalinye lempahla esiyitholayo. Sizogcina ividiyo okungenani izinsuku ezingama-30 ngemuva kokuthola Okuthengiswayo kwakho. Ungenza amalungiselelo nathi uku-oda ikhophi levidiyo yokwamukelwa nokukhishwa kwempahla yakho ngemali eyengeziwe. Sigcina ilungelo, ngokubona kwethu futhi ngaphandle kwesaziso kuwe, ukwenqaba noma yiliphi iphakethe elingena ngaphakathi. Ngenhloso yale Migomo Yokusetshenziswa, noma yiliphi iphakheji elingenayo esilinqabayo ngeke kuthathwe ngokuthi "lamukelwe" yithi. Noma ikuphi okungeziwe okunge-OEM (Original Equipment Manufacturer) okungeziwe (kufaka phakathi, kepha kungagcini emabhokisini ejwayelekile, amabhande we-aftermarket, nezinto zangaphandle) ngeke kwenyuse ukunikezwa kwewashi lakho. Ngeke zifakwe ohlwini futhi zizolahlwa lapho zifika esikhungweni sethu.
Ukunquma ukunikezwa kwe-Watch Rapport.
Sizonquma isilinganiso sethu senani lempahla yakho sisebenzisa izinto esizibona zifanelekile. Ukuze sazise Okuthengiswayo kwakho, singadinga ukuvula iwashi futhi sisuse amatshe ayigugu nezinye izinto kuwashi. Ngalokhu usigunyaza ukuthi sivule iwashi, sisuse amatshe ayigugu nezinye izinto ewashini, futhi sithathe ezinye izenzo njengoba sibona kunesidingo esizwakalayo sokukwazisa ngokufanelekile Okuthengiswayo kwakho, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo ukuthumela Okuthengiswayo kwakho, ngaphandle kwezindleko kuwe, umthengi ovela eceleni. Ngalokhu uphinde usigunyaze ukuthi senze insizakalo yethu yokulungiselela ejwayelekile (engahle ibe nokuhlanza, ukulungisa okuyisisekelo (njengoba sibona kufanelekile), ukulinganisa ngokunemba, ukuthambisa kanye nokuhlola ingcindezi), nokuthi sithwebule okuthengiswayo kwakho. Lapho sicubungula okuthengiswayo kwakho, sizokwazisa ngendlela ye-elekthronikhi (“Isithembiso sokunikezwa”) ngokunikezwa kwethu kokukhokha kokuthengiswayo kwakho (“Okunikezwayo”).
Ukwamukela noma Ukwala Ukunikezwa Kokugcina Kwe-Watch Rapport.
Ungawamukela lo Mnikelo ngendlela yokuxhumana nge-elektroniki oyisebenzisayo manje ukuxhumana neWatch Rapport kungakapheli amahora ayisikhombisa nambili (72) kusukela ngosuku lweSaziso Sokunikezwa. I-Watch Rapport, ngokubona kwayo kuphela, inganweba isikhathi sokwamukelwa komnikelo. Ukuze wenqabe okunikezwayo, kufanele ukwenze lokho nge-portal yomthengisi. Uma wenqaba Okunikezwayo, futhi ungasigunyazi ukuthi sibambe Okuthengiswayo kwakho isikhathi eside ukuze sikunikeze okunye ukunikezwa, sizothumela Okuthengiswayo kwakho kuwe kukheli eliboniswe kumarekhodi ethu kungakapheli izinsuku eziyishumi nanhlanu (15) zebhizinisi ngaphandle kubiza wena, futhi kuzoqinisekisa umthengisi wakho ngenani eligcwele lomnikelo.
Ukukhokhela Okuthengiswayo Kwakho.
Sizokhipha inkokhelo yokuthengiswayo ngenani elishiwo kumnikelo, sinciphise noma yiziphi izimali ezikhokhwa yi-Watch Rapport njengoba kushiwo ku-Offer (“Intengo Yokuthenga”), ngendlela yokukhokha oyikhethile ekuxhumaneni kwakho ngogesi neWatch Rapport ku ikheli olinikezile ngaphambi noma ngaphambi kwezinsuku eziyisikhombisa (7) zebhizinisi lokwamukela kwakho Okunikezwayo.
KONKE UKUDAYISWA KUPHELE! KONKE UKUDAYISWA KUPHELE. AKUKHO MBUYISELO, UKUBUYISELWA NOMA IZIKWELETI AZIVUMELEKANGA.
Uma ukhethe ukuthola Intengo Yokuthenga ngesheke, okwenziwayo kungokugcina uma i-Watch Rapport ithumele isheke kukheli olinikezile.
Impahla ebuyisiwe; Umshuwalense Ophumayo; Izindleko; Umshuwalense.
Uma kwenzeka ukuthi Impahla yakho ibuyiselwa kuwe ngokuhambisana nale Migomo Yokusetshenziswa, sizothumela Okuthengiswayo kwakho kuwe ekhelini lakho njengoba kubonakala kumarekhodi ethu ngendlela yokuthumela ngomkhumbi esiyikhethile ngezindleko zethu, futhi sizothenga umshuwalense ukumbozwa nge-Shipper for Merchandise ngenani eligcwele lomnikelo onqatshiwe. Uma ngabe iphakethe eliqukethe okuthengiswayo kwakho lilahleka ekuhambeni ngenkathi libuyiselwa kuwe ngokuhambisana nale Migomo Yokusetshenziswa, sizofaka isimangalo ku-Shipper bese sikukhokhela inani eligcwele esilitholile kusuka ku-Shipper.
IMIGOMO ESEBENZA EKUDAYISWENI KWEZOKUTHENGISA.
Le migomo nemibandela elandelayo ilawula noma ikuphi Okwenziwayo okuhlobene nokuthengisa, noma ukuzama ukuthengisa, kokuthengiswayo yi-Watch Rapport.
Inhloso yethu ukukuthengela iwashi lokunethezeka elisetshenziswe ngobunono ozikhethele lona, ​​ikhwalithi yesilinganiso sokuqala ngentengo yokuncintisana. Okwenza iWatch Rapport ibe yinkampani yokuqala engathenga kuyo kungenxa yokunakekelwa kwethu okukhethekile esikunikeza abathengi bethu abanokuqonda. Senza ukuthi utholakale kuwe iSayithi lethu, elenzelwe ukuhlinzeka ngemininingwane yezitayela, amasayizi, imibala, izinsimbi, amatshe, njll, kunoma yiliphi iwashi ongalifisa. Ngalokho kushiwo, iWatch Rapport ayifuni ukumela ukuthi konke Okuthengiswayo umthengi akubonayo eSizeni kusezintweni futhi kulungele ukuthengwa.
Lapho usukhethe futhi wafaka i-oda lakho, siqala inqubo yokuthola iwashi lezifiso zakho ngqo. Ngakho-ke, ngeshwa, asikwazi ukwenza noma yiziphi iziqinisekiso noma izithembiso ngosuku oluqondile lokulethwa noma ukugcwaliseka kokuthengiselana. Singakwazi ukuthola iwashi lakho lamaphupho komunye wabathengisi bethu abaningi kungakapheli usuku noma ezimbili. Kodwa-ke, kungathatha isikhathi eside ngokuya ngokuhluka kwe-oda lakho. Vele, i-Watch Rapport izosebenza ngokuzikhandla nangokushesha ukuthola Okuthengiswayo futhi ukukulethele. Uma uzwa ngathi asisebenzi ngesikhathi sakho esilindelwe, i-oda lakho lihlala lisekelwa yisiqinisekiso sethu sokubuyiselwa imali esingu-100%. Uma ungacela ukubuyiselwa imali, akunankinga, kepha akukho mbuyiselo eyoke itholakale noma iyiphi inzalo noma ngabe i-Watch Rapport ibambe isikhathi esingakanani emalini oyikhokhile.
I-Watch Rapport izosebenzisa imizamo yayo emihle ukunazisa ngenqubekela phambili yethu. Kepha ukuxhumana okwenzeka kabusha akuphoqelekile futhi kungukuphela kwesibopho sakho ukuxhumana nathi uma ufuna ukuvuselelwa kwe-oda noma olunye ulwazi oluphathelene nokuthengiselana.
Ubungozi bokulahlekelwa; Ukuthunyelwa Kwamanye Amazwe.
Yonke into edayiswa yiWatch Rapport ithengiswa ngokulandela inkontileka yokuthumela impahla. Lokhu kusho ukuthi ubungozi bokulahleka nesihloko sezinto ezinjalo kudlulela kuwe lapho siletha ophethe. Okokuthengiswa okuthunyelwa endaweni engaphandle kwase-US noma ezindaweni zase-US, wena, njengomthengi, kudingeka ukuthi ukhokhe izindleko zamasiko, kanye nanoma iyiphi intela yokungenisa ehambisanayo, i-VAT, noma imisebenzi. I-Watch Rapport ayikwazi ukunikela ngamashaji athile amasiko ekuthengweni ngakunye njengoba izinqubomgomo zehluka kakhulu ngezwe. Uyakhuthazwa ukuthi uthinte ihhovisi lakho lendawo yangakini ukuthola izilinganiso zamanani entengo. I-Watch Rapport izofaka ikhophi ye-invoyisi Yokuthengiswayo nakho konke ukuthengwa, futhi izwe ngalinye lizonquma imali efanelekile ngokuya nge-invoyisi enjalo. I-Watch Rapport ngeke ilebule into njengesipho noma imemezele inani elincane ku-invoyisi kunentengo yokuthenga ekhokhelwe. I-Watch Rapport izokhipha imali ebuyiswayo yentengo etholwe yi-Watch Rapport, isuse konke ukukhokhiswa kwemali yokuthunyelwa kanye namasiko atholakele kanye nemali yokubuyiselwa kabusha enanini elinqunywe ngokufanele yi-Watch Rapport, nganoma yikuphi ukuthengiswa okubuyiselwe ku-Watch Rapport yizikhulu zamasiko ngenxa kuwena, njengomthengi, wenqaba okokuthengiselana okunjalo emasikweni.
Ukubuyisa, Ukubuyiselwa kwemali kanye nesihloko.
Zonke izimbuyiselo nezimbuyiselo zilawulwa yinqubomgomo yethu yokubuyisa. I-Watch Rapport ayithathi isihloko sezinto ezibuyisiwe kuze kufike leyo nto endaweni yethu.
Sizama ukunemba ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, asiqinisekisi ukuthi izincazelo ze-Merchandise noma okunye okuqukethwe kusayithi lethu, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, imininingwane yamanani, inembile, iphelele, inokwethenjelwa, yamanje, futhi ayinaphutha. Ngokwengeziwe, uyaqonda ukuthi Okuthengiswayo okuthengayo kungahle kungafiki njengoba kuchaziwe. Uma kwenzeka lokhu futhi unganelisekile ngokuthengiswayo unelungelo lokubuyisa okuthengile okuthengile kungakapheli izinsuku ezingama-30 ukuqinisekisile ukulethwa kuwe.
Amanani entengo edayiswa yithi angashintsha noma kunini, ngaphandle kwesaziso. Mayelana nezinto ezithengiswe yithi, asikwazi ukuqinisekisa intengo yento uze u-ode. Naphezu kwemizamo yethu emihle, inani elincane lezinto ezisohlwini lwethu kungenzeka lingabizi kahle. Uma intengo efanele yento ethengiswe yithi ingaphezulu kunentengo yethu ebekiwe, ngokuqonda kwethu, singaxhumana nawe ukuze sithole imiyalelo ngaphambi kokuyithumela noma sikhansele i-oda lakho futhi sikwazise ngokukhanselwa okunjalo.
Sinikeza izixhumanisi kumasayithi ezinkampani ezihambisanayo namanye amabhizinisi athile. Asinasibopho sokuhlola noma ukuhlola, futhi asigunyazi ukunikezwa kwanoma iliphi lala mabhizinisi noma abantu noma okuqukethwe kwamawebhusayithi abo. I-Watch Rapport ayithathi isibopho noma isikweletu ngezenzo, umkhiqizo, nokuqukethwe kwakho konke lokhu kanye nabanye abantu besithathu. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela izitatimende zabo zobumfihlo nezinye izimo zokusebenzisa.
Ukunemba kwenkokhelo; Imininingwane ye-Akhawunti; Imali nezinkokhelo.
Sigcina ilungelo, ngesaziso noma ngaphandle kwaso, (a) sokuyeka noma ukunciphisa inani elitholakalayo lanoma yimuphi umkhiqizo noma isici Sezinsizakalo futhi (b) sinqabe ukuvumela noma yimuphi umsebenzisi ukuthi athenge umkhiqizo noma ahambise noma yimuphi umkhiqizo kumsebenzisi. Ngokuqonda kwethu, singanciphisa noma sikhansele amanani athengwe umuntu ngamunye, umndeni ngamunye noma i-oda ngalinye. Le mikhawulo ingafaka ama-oda abekwe noma ngaphansi kwe-akhawunti yekhasimende efanayo, kanye / noma ama-oda asebenzisa ikheli elifanayo lokukhokha kanye / noma lokuthumela. Uma kwenzeka senza ushintsho noma sikhansela i-oda, singazama ukukwazisa ngokuxhumana ne-imeyili kanye / noma ikheli lokukhokha / inombolo yocingo enikezwe ngesikhathi kwenziwa i-oda.
Uyavuma ukunikeza ulwazi lwamanje, oluphelele nolunembile nolwazi lwe-akhawunti ngakho konke ukuthengwa okwenziwe kithi. Uyavuma ukuvuselela ngokushesha i-akhawunti yakho nolunye ulwazi, kufaka phakathi ikheli lakho le-imeyili nenombolo yocingo ukuze sikwazi ukuqedela okwenzayo futhi sixhumane nawe lapho kudingeka.
Uma uthenga Okuthengiswayo Ngezinsizakalo, (a) uyavuma ukukhokha intengo yalokho Okuthengiswayo okushiwo Ezinsizakalweni, zonke izindleko zokuthumela nokuphatha (uma zikhona), nazo zonke izintela ezisebenzayo nezimali zamasiko ngokuya ngokuthenga kwakho ( “Inani Lokuthenga Okugcwele”). Ukubuka okuwukuphela kwendlela eyamukelekayo yokukhokha ukudluliswa kwentambo yasebhange. Ngaphandle kokuthi kuphawulwe ngenye indlela, zonke izinkomba zemali ziseMelika. Zonke izimali zikhokhwa ngokuya ngemigomo yokukhokha esebenza ngesikhathi imali izokhokhwa. Ama-oda ngeke acutshungulwe kuze kube yilapho sekutholwe inkokhelo ephelele. Uma sekutholakele ukukhokha, lezo zimali zizofakwa kwi-akhawunti yasebhange yeWatch Rapport, okumele kucace ukuthi akuyona i-akhawunti ethembekile noma i-akhawunti yokungena, futhi ingasetshenziselwa izinhloso zokusebenza (njengokukhokha kumuntu wesithathu ngokuthenga Okuthengiswayo).
Imigomo Esebenza Kuko Konke Okwenziwayo.
Ilayisense Yokusebenzisa Izinsizakalo.
Ngokuya ngokuhambisana kwakho nale Migomo Yokusetshenziswa, i-Watch Rapport ikunikeza, ilayisense yomuntu siqu, engafinyeleleki, engenakuguqulwa, engashintshwa, nelinganiselwe (ngaphandle kwelungelo le-sublicense) ukufinyelela nokusebenzisa Izinsizakalo (kufaka phakathi izibuyekezo nokuthuthukiswa okufaka esikhundleni noma okunezela nganoma iyiphi indlela futhi engasatshalaliswa nelayisense elehlukile, kanye nanoma yimiphi imibhalo) kuphela kumakhompyutha nakumadivayisi okungewakho noma owalawulayo, futhi kuncike ekukhawulweni okubekwe ngezansi. Le Migomo Yokusetshenziswa ikhawulelwe kumalungelo empahla yeWatch Rapport kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo nabanikezeli bamalayisense futhi awafaki amalungelo kwamanye amalungelo obunikazi noma empahla enobuhlakani. Sigodla noma imaphi amalungelo nawo wonke amalungelo ongawanikwanga ngokucacile ngokuya ngale Migomo Yokusebenzisa. Amalungelo alinganiselwe owanikezwa ukufinyelela nokusebenzisa Amasevisi aqukethe ilayisense elinganiselwe futhi awakhi ukuthengiswa kwanoma yiluphi uhlelo lwesoftware.
Uma usungula i-akhawunti kuSayithi, unesibopho sokugcina imfihlo ye-akhawunti yakho nephasiwedi yakho futhi uvimbele ukufinyelela kukhompyutha yakho, futhi uyavuma ukwamukela umthwalo wazo zonke izinto ezenzeka ngaphansi kwe-akhawunti yakho noma iphasiwedi. I-Watch Rapport iyayithengisa imikhiqizo yezingane, kepha iyayithengisela abantu abadala, abangathenga ngendlela yethu kuphela yokukhokha, ukudluliswa kwentambo yasebhange. Uma ungaphansi kweminyaka engu-18, ungasebenzisa iSayithi kuphela ngokubandakanya umzali noma umnakekeli. Sinelungelo lokwenqaba insizakalo, ukunqamula ama-akhawunti, ukususa noma ukuhlela okuqukethwe, noma ukukhansela ama-oda ngokubona kwethu.
Imithetho Elawula Ukusebenzisa Kwakho Isiza.
Unesibopho ngokuphelele sanoma yikuphi ukulimala okubangelwa ukusebenzisa kwakho iSiza. I-Watch Rapport ayiqinisekisi ukuthi ukusebenza noma ukusebenza kweSayithi ngeke kube namaphutha, ukuthi iSayithi noma iseva eyenza itholakale izobe ingenawo amagciwane noma ezinye izinto eziyingozi. Njengomsebenzisi, ubhekana nesibopho esigcwele sanoma yiziphi izindleko, izindleko, ukulahleka, noma umonakalo owenziwe nguwe ngokuxhumeka, okuvela, noma okuvela ekusetshenzisweni kweSayithi.
Umele futhi uqinisekisa ukuthi: (a) (i) ngeke usebenzise iSayithi nganoma iyiphi injongo engagunyaziwe kubandakanya ukuqoqa amagama abasebenzisi kanye / noma amakheli e-imeyili abanye abasebenzisi nge-elektroniki noma ezinye izindlela ngenhloso yokuthumela i-imeyili engacelwanga noma okunye ukuxhumana ngogesi ; (ii) ngeke ukwazi ukungena eSizeni ngokusebenzisa imibhalo, ama-bots noma ezinye izindlela ezizenzakalelayo; (iii) ngeke ukwazi ukungena eSizeni nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kwesixhumi esibonakalayo esikunikeza sona noma uhlanganyele ekubunjweni okungagunyaziwe, noma ekuxhumaneni neSayithi ngaphandle uma sigunyazwe ngenye indlela ngokuvumelana nesivumelwano esibhaliwe; (iv) ngeke udlulisele izincwadi ezixhunyanisiwe, i-imeyili eningi noma engenamsoco noma uphazamise, uphazamise, noma udale umthwalo ongadingekile eSizeni noma kumanethiwekhi noma izinsizakalo ezixhunywe eSizeni, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukugqekeza eSizeni; (v) ngeke uzenze ongeyena omunye umuntu noma inhlangano, unikeze ngemininingwane yokuhlonza engamanga noma edukisayo, noma uhlasele ubumfihlo, noma wephule ilungelo lomuntu siqu noma lobunikazi, lanoma yimuphi umuntu noma inhlangano; (vi) uyavuma ukuthi ngeke usebenzise Izinsizakalo uma ungakwazi ngokugcwele futhi ukwazi ngokomthetho ukuvumelana nale Migomo Yokusetshenziswa, (vii) uzohlinzeka i-Watch Rapport nganoma yibuphi ubufakazi bobunikazi esingabucela, (viii) uzosebenzisa izinsizakalo ngezinhloso ezisemthethweni kuphela, (ix) ngeke usebenzise izinsizakalo ukuthumela noma ukugcina noma yini engekho emthethweni noma ngezinhloso zokukhwabanisa noma ukwenza noma ikuphi ukuziphatha okungekho emthethweni, okuhlaselayo, okuyihlazo noma okungahambi kahle, (x) ngeke sebenzisa Izinsizakalo ukukhangisa, ukucela noma ukudlulisa izikhangiso zentengiso, kufaka phakathi "ugaxekile", (xi) ngeke usebenzise Izinsizakalo ukudala inkathazo, ukucasula noma ukuphazamisa, (xii) ngeke uphazamise ukusebenza kahle kwenethiwekhi, (xiii ) ngeke uzame ukulimaza amasevisi nganoma iyiphi indlela, (xiv) ngeke ukopishe, noma usabalalise amasevisi noma okunye okuqukethwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela ku-Watch Rapport, (xv) uzosebenzisa izinsizakalo ukuzisebenzisela wena kuphela ngeke ithengise kabusha ngengxenye yesithathu y, (xvi) ngeke uvimbe, ukhubaze noma ungaphazamisi izici ezihlobene nokuphepha zeSayithi noma izici ezivimbela noma ezivimbela ukusetshenziswa noma ukukopishwa kwanoma iyiphi impahla yengqondo noma ukuphoqelela ukulinganiselwa ekusetshenzisweni kweSiza noma izinto eziseSizeni; futhi (xvii) ngeke ubangele ukuthi kuvele noma iyiphi i-pop-up, i-pop-under, ukuphuma kwamawindi, izinkinobho zokwandisa, amabhanela, izikhangiso noma yini enye enciphisa, emboza noma evimbela ukuboniswa okuphelele kweSayithi.
(b) Uyavuma ukuvikela Izinsizakalo, nokuqukethwe kwazo okuyizimpahla, imininingwane nokunye, kunoma ikuphi ukufinyelela okungagunyaziwe noma ukusetshenziswa, futhi uyavuma ukuthi ngeke usebenzise Izinsizakalo noma okuqukethwe okunjalo okuphathelene, imininingwane noma ezinye izinto ngaphandle uma kuvunyelwe ngokusobala lapha noma ugunyazwe ngokusobala nge-Watch Rapport. Ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngqo lapha noma kugunyazwe ngokusobala nge-Watch Rapport, uyavuma ukuthi ngeke uqonde ngqo noma ngokungaqondile: (i) ukusabalalisa, ukuthengisa, ukwabela, ukufaka amanani, ukudlulisa, ukuqasha, ukuqasha, ukubolekisa, imali encane, ukuguqula, ukwaba isikhathi noma usebenzise ngenye indlela iZinsizakalo nganoma iyiphi indlela engagunyaziwe, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho ngokungena ngokungemthetho noma ukuthwala umthwalo wenethiwekhi, (ii) ukusebenzisa Izinsizakalo kunoma yiluphi uhlelo lwehhovisi lezinsizakalo, (iii) ukukopisha, ukukhiqiza kabusha, ukuvumelanisa, nokwakha imisebenzi ethathwe kokunye, ukuhumusha, ukwenza okwasendaweni, ukubeka noma ukuguqula ezinye izinsizakalo, noma yikuphi ukuvuselelwa, noma enye ingxenye yalokho nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela noma nganoma iyiphi indlela, (iv) ukuvuna noma ukusula noma yikuphi okuqukethwe noma idatha evela kumasevisi, noma (v) vumela noma yimuphi umuntu wesithathu ukuthi ahlanganyele kunoma yisiphi isenzo esichazwe ezigabeni (vi), (viii), (ix) no (x) ngenhla.
Uyaqhubeka nokuqonda futhi uyavuma ukuthi awuvunyelwe: buyisela emuva ukuhumusha noma ngenye indlela ukubuyisela emuva unjiniyela noma iyiphi ingxenye Yezinsizakalo, noma yikuphi ukuvuselelwa, noma enye ingxenye yalokho (ngaphandle kwalapho kuphela noma yikuphi ukuvinjelwa okungenhla kunqatshelwe ngumthetho osebenzayo noma ngezinga elingavunyelwa yimigomo yelayisense elawula ukusetshenziswa noma iziphi izinto ezivulekile ezitholakele ezifakwe nezinsizakalo), (iii) zisebenzise noma yiziphi izindlela ukuthola ikhodi yomthombo yanoma iyiphi ingxenye yezinsizakalo, noma (iv) uma kungenjalo zidlula noma yikuphi ukusebenza okulawula ukufinyelela noma okuvikela ezinye izinsizakalo. Noma imuphi umzamo wokwenza noma yikuphi okungenhla kungukwephula amalungelo e-Watch Rapport nabanikezeli bayo bamalayisense. Uma wephula le mikhawulo, ungahle ubhekane nokushushiswa kanye nomonakalo. Uyavuma futhi ukuthi awusebenzisi iMisebenzi nganoma iyiphi indlela ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, ukuqhatha, ukusongela, ukuhlambalaza noma ukwephula noma ukuphula amalungelo elinye iqembu, nokuthi iWatch Rapport ayinacala nganoma iyiphi indlela ekusetshenzisweni okunjalo nguwe, noma ngemiyalezo ehlukumezayo, esongelayo, ehlambalazayo, ehlambalazayo noma engekho emthethweni noma ongayithola ngenxa yokusebenzisa Izinsizakalo.
Uyaqonda futhi uyavuma ukuthi i-Watch Rapport ilibeke ngokusobala ilungelo lokukhansela noma iyiphi i-oda nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isizathu. I-Watch Rapport izobuyisa inani lemali ekhokhelwe kuze kube usuku lokukhanselwa. Ngokwengeziwe, uyaqonda futhi uyavuma ukuthi i-Watch Rapport iyaligodla ilungelo lokwenqaba ukusebenzela noma ngubani nganoma yisiphi isizathu nganoma yisiphi isikhathi.
Ukunemba, Ukuphelela kanye nokugcina isikhathi kolwazi.
Asinasibopho uma imininingwane eyenziwe itholakale kuleli Sayithi ingalungile, iphelele noma ingeyamanje. Izinto ezikulesi Siza zihlinzekelwe imininingwane ejwayelekile kuphela futhi akumele zithembele kuzo noma zisetshenziswe njengesisekelo sodwa sokwenza izinqumo ngaphandle kokubonisana nemithombo yolwazi eyinhloko, enembile, ephelele ngokuphelele noma yesikhathi. Noma ikuphi ukuncika kokwaziswa okukulesi Sayithi kungazibeka engcupheni yakho. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukushayela isikhungo sethu sosizo lwamakhasimende ku- (800) 571-7765. Leli Sayithi lingaqukatha imininingwane ethile yomlando. Imininingwane engokomlando, empeleni, akuyona eyamanje futhi inikezwa ireferensi yakho kuphela. Sinelungelo lokushintsha okuqukethwe kwalesi Sayithi nganoma yisiphi isikhathi, kepha asinaso isibopho sokuvuselela noma yiluphi ulwazi kwiSayithi lethu. Ngaphandle kwalapho kuphawulwe ngenye indlela, intengo yohlu, intengo elinganiselwe yokuthengisa, intengo ephakanyisiwe yokuthengisa, noma imininingwane efanayo yentengo eboniswe ngokuthengiswayo ibonisa intengo ephelele yokuthengisa efakwe kuhlu kumkhiqizo uqobo, ephakanyiswe ngumenzi noma umphakeli, noma ilinganiselwa ngokuya ngomkhuba ojwayelekile wemboni ; noma inani elilinganisiwe lokuthengisa lento efakiwe ngokufanayo enikezwa kwenye indawo. Lezi zintengo isilinganiso sokuqhathaniswa kwentengo futhi kungenzeka noma zingamele intengo ekhona kuzo zonke izindawo nganoma yiluphi usuku oluthile. Asenzi izethulo noma amawaranti ngokunemba noma ukuphelela kwanoma iyiphi intengo noma eminye imininingwane efakwe kuleli Sayithi, futhi akufanele uthembele kulolu lwazi. Izintengo zangempela zokuthengisa zingahluka kakhulu kulezo eziboniswe kuleli Sayithi. Sinelungelo lokushintsha noma yiluphi ulwazi ngezikhathi ezithile ngaphandle kwesaziso, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, imininingwane ephathelene namanani, amamodeli, nokucaciswa. Asithathi noma yisiphi isibopho ngokunemba, ukuphelela noma ubuqiniso banoma yiluphi ulwazi oluqukethwe kuleli Sayithi, kufaka phakathi amanani entengo okuthengiswa. Uyavuma ukuthi kungumsebenzi wakho ukuqapha ushintsho kuSayithi lethu.
Izinsizakalo nokuqukethwe kwazo, kufaka phakathi “ukubukeka nokuzizwa” kwazo (isb. Umbhalo, imidwebo, izithombe, ama-logo), okuqukethwe okunobunikazi, imininingwane nezinye izinto, kuvikelwe ngaphansi kwempahla enobuhlakani, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba neminye imithetho. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi i-Watch Rapport kanye / noma abanikazi bayo bamalayisense banamalungelo, isihloko nentshisekelo nakuzo Izinsizakalo (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo noma yiliphi ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, imfihlo yezohwebo, uphawu lwentengiso, ukuboniswa, ukwazi kanjani nanoma yikuphi wonke amanye amalungelo empahla yengqondo noma ahlobene nalokho) futhi uyavuma ukungathathi zinyathelo ezingahambisani nezintshisekelo ezinjalo zobunikazi. Awutholi noma yimaphi amalungelo noma amalayisense ngaphansi kwanoma yimaphi amalungelo obunikazi e-Watch Rapport (noma abanikeli bayo bamalayisense), izicelo zobunikazi, amalungelo obunikazi, izimfihlo zokuhweba, izimpawu zokuhweba noma amanye amalungelo empahla yengqondo ngenxa yale Migomo Yokusetshenziswa. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi izici nokusebenza kweZinsizakalo, nakho konke isoftware, okuqukethwe, idatha, imininingwane kanye nezinto ezisetshenzisiwe eziqukethe imininingwane eyimfihlo neyobunikazi be-Watch Rapport (noma abanikezeli bayo bamalayisense), ngakho-ke uyavuma (a) ukugcina imfihlo yalolo lwazi kusetshenziswa imizamo nokunakekela okufanelekile (kodwa akukho ngaphansi kwemizamo nokunakekela okufanayo oyisebenzisayo ukuvikela imininingwane yakho eyimfihlo kanye neyokuphathelene) futhi ungaludaluli lolo lwazi kunoma yimuphi umuntu ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yeWatch Rapport futhi (b) asebenzise kuphela leyo mininingwane ngezinhloso zokusebenzisa Amasevisi ahlinzekwa yi-Watch Rapport ngezansi.
Noma iziphi (a) iziphakamiso zokulungiswa, ukuguqulwa kanye nokuguqulwa kwezinsizakalo nezinye izimpendulo (kufaka phakathi kepha kungagcini kwizilinganiso zempendulo ebhaliwe noma yomlomo), imininingwane nemibiko enikezwe i-Watch Rapport nguwe (ngokuhlanganyela "Impendulo") nakho konke (b) ukuthuthuka, ukuvuselelwa, ukulungiswa noma ukuthuthukiswa, noma ngabe kwenziwe, kwenziwa noma kwenziwa yiWatch Rapport noma okunye okuhlobene Nezinsizakalo (ngokuhlanganyela, "Ukubuyekezwa"), futhi kuzohlala kuyimpahla yeWatch Rapport. Uyavuma futhi uyavuma ngokusobala ukuthi noma imuphi umnikelo wempendulo noma Wokubuyekezwa awunikeli futhi ngeke ukunikeze noma yiliphi ilungelo, isihloko noma intshisekelo Kwezinsizakalo noma kunoma iyiphi Impendulo noma Ukubuyekezwa okunjalo. Yonke Impendulo nokubuyekezwa iba impahla eyodwa futhi ekhethekile yeWatch Rapport neWatch Rapport ingasebenzisa futhi idalule Impendulo kanye / noma Ukubuyekezwa nganoma iyiphi indlela futhi nganoma iyiphi inhloso nganoma yini ngaphandle kokuthola esinye isaziso noma isinxephezelo kuwe futhi ngaphandle kokugcinwa nguwe nganoma iyiphi impahla noma enye kwesokudla noma isimangalo. Ngale ndlela wabela i-Watch Rapport noma yini, isihloko kanye nentshisekelo (kufaka phakathi, kepha kungagcini, kunoma yiliphi ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi, imfihlo yezohwebo, uphawu lwentengiso, ukuboniswa, ukwazi, amalungelo okuziphatha nanoma yiliphi elinye ilungelo lokuvikela impahla ) ongaba nayo futhi kunoma iyiphi impendulo kanye nokubuyekezwa. Ngokwesicelo se-Watch Rapport, uzosebenzisa noma iyiphi idokhumenti, ukubhalisa noma ukufayila okudingekayo ukuze kusebenze isabelo esingenhla.
Imidiya Yezokuxhumana / Ukubuyekezwa Kwe-inthanethi.
I-Watch Rapport iyayiqonda indima ebalulekile edlalwa ukubuyekezwa kwe-inthanethi ekwakheni idumela lebhizinisi. Siyaqonda futhi nesifiso sekhasimende lethu sokunikeza isibuyekezo esiku-inthanethi. Ngenkathi silwela njalo ukukunikeza ikhwalithi engcono kakhulu maqondana nokusebenzisa kwakho Izinsizakalo, siyavuma ukuthi ngezikhathi ezithile kungaba khona i-mihap maqondana nokusebenzelana kwakho nathi. I-Watch Rapport izosebenza ngesikhathi esifanele ukuxazulula noma yikuphi ukuhlupheka okungenzeka kwenzeke. Ukwaneliseka kwakho kuyinto yethu yokuqala eza kuqala.
Kuze kube sekugcineni, i-Watch Rapport ihambisana ne-100% ne-Consumer Review Fairness Act ephoqelelwa yi-FTC. Yize sikholelwa ekuhlolweni okuthembekile komthengi ngeke sikubekezelele ukubuyekezwa okuqukethe noma iyiphi yale nkulumo enqatshelwe elandelayo: (1) noma iyiphi inkulumo equkethe imininingwane eyimfihlo noma eyimfihlo - ngokwesibonelo, imininingwane yomuntu wezezimali, yezokwelapha, noma yezisebenzi noma izimfihlo zokuhweba zenkampani ; (2) noma iyiphi inkulumo ehlambalazayo, ehluphayo, ehlambalazayo, enenhlamba, enenhlamba, ecacisa ngokocansi, noma engafanele maqondana nobuhlanga, ubulili, ubulili, ubuhlanga, noma olunye uphawu lwangaphakathi; (3) noma iyiphi inkulumo engahlobene nemikhiqizo noma izinsizakalo zenkampani; noma (4) noma iyiphi inkulumo ngokusobala engamanga noma edukisayo. Sicela waziswe uma uthumela inkulumo enqatshelwe, i-Watch Rapport izokwenza yonke imizamo, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho, izinyathelo zomthetho, ukuthi yehliswe ngokushesha.
Uma kwenzeka uzithola ufisa ukuthumela isibuyekezo esingesihle, sicela ngaphambi kokuthumela usishayele ucingo sikhulume ngenkinga. Kungenzeka ukuthi kube khona ukungaqondi kahle futhi sifuna ukulungisa izikhalo zakho ngokushesha futhi silungise udaba ngendlela evumayo.
Ilayisensi Yesibonelelo - Okuqukethwe Komsebenzisi
Njengombandela wokusebenzisa kwakho Izinsizakalo, unikeza i-Watch Rapport ilayisense engabandakanyi, engapheli, engenakuguqulwa, engenamali, emhlabeni wonke, edlulisekayo, nelayisense yokungena, yokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukudlulisa, ukubonisa, ukushicilela, ukusabalalisa, ukuguqula kanye lungisa futhi wakhe umsebenzi ovela kokunye okuqukethwe okulayishayo, okushicilelayo, okuhambisayo noma okudlulisayo ukuze kwenziwe kutholakale Ngezinsizakalo ("Okuqukethwe Kwakho"). Ngokuthumela Okuqukethwe Kwakho ngokusebenzisa Izinsizakalo, umela futhi uqinisekisa (a) ukuthi ungumnikazi noma ulawula onke amalungelo wokuqukethwe kwakho, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, wonke amalungelo obunikazi, (b) ukuthi okuqukethwe kwakho kunembile, futhi (c) lokho ukusetshenziswa kokuqukethwe kwakho akwephuli le migomo yokusetshenziswa noma inqubomgomo yobumfihlo futhi ngeke kulimaze noma yimuphi umuntu noma inhlangano. Asithwali sibopho futhi asithathi cala ngokuqukethwe noma izinto ezisetshenzisiwe noma ezithunyelwe ngezinsizakalo nguwe noma omunye umuntu wesithathu.
SILONDOLOZA ILUNGELO LOKUSUSA OKUNYE OKUQUKETHWE, OKOKWENZEKA, NOMA UKUTHOBELA NGANOMA YISIPHI ISIZATHU, KUFAKA NOMA SINQUMELELA EKUTHOLAKALISENI KWETHU OKWEPHULA UMTHETHO NOMA ILUNGELO LOMUNTU, KUPHATHA AMALUNGELO ANOMA WOMUNTU WOMUNTU, NOMA NGABANYE BANGABANJALO. ISAYITHI NOMA IMISEBENZI.
Izinsizakalo Zesithathu Nezinto Zokusebenza
Amasevisi athile angabonisa, afake noma enze okuqukethwe okutholakalayo, idatha, ulwazi, izinhlelo zokusebenza noma izinto ezivela kubantu besithathu (“Izinto Zesithathu”) noma zinikeze izixhumanisi kumawebhusayithi athile avela eceleni. Ngokusebenzisa Izinsizakalo, uyavuma futhi uyavuma ukuthi i-Watch Rapport ayinasibopho sokuhlola noma ukuhlola okuqukethwe, ukunemba, ukuphelela, ukugcina isikhathi, ukufaneleka, ukuthobela i-copyright, ukuba semthethweni, isizotha, ikhwalithi noma enye into ethile yalezi Zinto Zesithathu noma amawebhusayithi. I-Watch Rapport ayiqinisekisi noma ayivumi futhi ayicabangi futhi ngeke ibe nesibopho noma isibopho kuwe noma kunoma yimuphi omunye umuntu ngezinsizakalo zangaphandle, Izinto Zesithathu noma amawebhusayithi, noma ezinye izinto, imikhiqizo, noma izinsizakalo zezinkampani zangaphandle . Izinto Zesithathu kanye nezixhumanisi kwamanye amawebhusayithi kunikezwa kuphela njengokulula kuwe.
Izinsizakalo ezivela eceleni kanye nezinto ezisetshenziswayo ezingatholwa kusuka ekubonisweni noma ekuxhunyanisweni nakho kusuka Ezinsizakalweni futhi azitholakali ngazo zonke izilimi noma kuwo wonke amazwe. I-Watch Rapport ayivezi ukuthi noma yiziphi izinsizakalo ezivela eceleni nezinto zangaphandle zingafaneleka noma zitholakalele ukusetshenziswa kunoma iyiphi indawo ethile. Ngezinga okhetha ngalo ukufinyelela kuzinsizakalo ezinjalo noma Izinto Zesithathu, ukwenza lokho ngokuthanda kwakho futhi unesibopho sokuhambisana nanoma yimiphi imithetho esebenzayo, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe emithethweni yendawo esebenzayo.
NGENHLOSO YOKUTHUTHA, UYAVUMELANA NOKUSETSHENZISWA KWEZIMPAWU ZOKUGCINA, UKUTHOLA IZAZISO NGE-E-MAIL NOMA NGEZINYE IZINDLELA ZOKUPHAKATHI, UKUSETSHENZISWA KWEZINKONZO ZOKUGCINA, NOKWAMUKELA LE MIGOMO YOKUSETSHENZISWA NGEZINHLELO ZE-ELECTRONIKI.
UNESIBOPHO SOKUDALWA NOKUGCWELE UKUSEBENZISA KWAKHO IZINSIZAKALO, KUFAKA NOKUXHUMANA NABANYE ABASEBENZISI BENKONZO. NIYAVUMA NGOKUVAMILE FUTHI NIYAVUMELANA UKUTHI UKUSETSHENZISWA KWEMISEBENZI KUSENGOZINI YENU NOKUTHI INGOZI EPHELELE UKUZE IKWANELISE IZINGA, UKWENZA, UKUQINISEKA NOMZAMO KUNANI. NGOKUPHELELE KOKUKHULU OKUVUNYELWE NGOMTHETHO OSEBENZEKAYO, IZINSIZAKALO (KUFAKWA, NGAPHANDLE KOKUKHAWULWA, YILUPHI IZINTO ZAMAQEMBU ESITHATHU, INHLANGANO YESITHATHU NOMA IZINKONZO) ONIKEZWA NGAYO NGOKWENZEKA KANYE NOKUTHOLAKALA KONKE, NGAKHO KONKE ISIQINISEKISO SONOMA YILUPHI UHLOBO, BESE UBHEKA I-RAPPORT NGOKUQHELEKILE IZIDELA ZONKE IZIQINISEKISO NEZIMO NGOKUHLONIPHA IZINSIZAKALO (KUFANELE UKUSETSHENZISWA, UKUSETSHENZISWA NOKUSEKELWA KODWA), OKUFANELE UKUCHAZA, UKUFAKA OKANYE ISITATIMENDE, UKUFAKA ISIHLOKO NOMA IZIMISO ZOKUTHENGISA, ZOKWANELISEKA KWEZINGA, ZOKULUNGELA INJONGO ETHILE, YOKUQINISEKISA, YOKUTHOKOZA KAKHULU, ISIHLOKO NOKUNGAPHAMBI KWAMALUNGELO OKWETHATHU, UKUTHATHA INJABULO, UKUVIMBALWA KWEENKAMPANI, KANYE YONKE IZIQINISEKISO EZIFAKWE KUSONKE ISIQINISEKISO SOKUSEBENZA NOKUSETSHENZISWA KWEZOHWEBO. I-WATCH RAPPORT AYIQINISEKI UKUTHI (A) IZINSIZAKALO ZIZOHLANGABEZANA NEZIDINGO ZAKHO, (B) UKUSETSHENZISWA KWEENKONZO KUZOKUPHAKANYISWA NOMA I-VIRUS- NOMA KUNGANALO IPHUTHA, (C) UKUTHI IMISEBENZI IZOSEBENZA NOMA IQHUBEKE NEZINYE IZICELO NOMA YILUPHI UHLELO NOMA IDIVAYISI, NOMA (D) AMAKHAMBI KWEZINSIZO AYOLUNGISWA. YILUPHI ISELULEKO NGOMLOMO NOMA ESIBHALWE ESINIKEZELWA NGOKUBUKWA KWE-RAPPORT NOMA ABASEBENZI BAYO ABAGUNYAZIWE NGEKE BABONELWE UKUTHI BADALA YILUPHI ISIQINISEKISO. AYIKHO IMINININGWANE YOMLOMO NOMA EBHALWAYO NOMA ISELULEKO ESINIKWA NGOKUBUKA KWABABUKI NOMA NGABAMELE BAYO ABAGUNYAZELWE BAYOKWAKHA ISIQINISEKISO. EMINYE IMITHETHO YOKUPHILA AYIKUVUMELI UKUKHISHWA KWEZIQINISEKISO EZIFAKIWE KANJALO EZINYE NOMA ZONKE IZIKHIPHISO EZINGENHLA ZINGASE ZINGASETSHENZISWA KUWE.
YONKE IMINININGWANE, OKUQUKETHWE, IZINTO, IMERCHANDISE KANYE NEZINYE IZINSIZO EZIFAKWE KUWE NOMA OKUNYE OKWENZIWE UKUTHOLAKALA KWETHU OKANYE NGOKUTHI ISAYITHI LINIKEZELWA ESISEKELWENI “NJENGOBA SINjalo” NANGOKUTHOLAKALA KOKUTHOLAKALA, NGAPHANDLE KWENYE IMIBHALO EBHALWE.
NGOKUGCWELE NGOKUVUMELEKILE NGOMTHETHO OSEBENZAKALAYO, BUKA I-RAPPORT IKHALA IZIMPAWU ZONKE, UVEZE NOMA UFAKELWE, KODWA AKUNAMKHAWULO WOKUFAKA IZIMALI KUWE.
KUZO ZONKE IZENZAKALO KUYO YONKE LE MIGOMO YOKUSETSHENZISWA, UYAVUMELA UKUTHI IMIKHAWULO YOMTHETHO YAKHO YOKUBOPHEZEKA KWETHU NGANOMA YILUPHI IZIMANGALO NOMA IZENZO ZOKULAHLELWA, EZILIMALEKILE, NOMA EZINQAMULELE UKUTHENGISWA OTHUMELE KITHI NGEKE KUKUDLULISELE OKUNCANE KWEMINIKELO YAKHO. NGOKUVUTHA KONKE. NGOKUQAPHELA UKUKHOHLWA, UMA ISIMANGALISO ESITHOLA KUWE (I) SIHLUKENE NGOKWENZAKALO YOKUCHAZWA OWASINIKELA KONA, (II) INGABE INOMBOLO YOKUSEBENZA EGUQUKILE NOMA EGUQUSHELWE, NOMA (III) INGOSI LOKUSEBENZA , BESE UMKhawulo WOMTHETHO WESIBOPHO KWETHU NGANOMA YILUPHI IZIMANGALO NOMA IZENZO ZOKULAHLEKELWA, OKULIMALEKILE, NOMA OKULAWULWE UKUTHUTHUKISWA OTHUMELE KITHI NGEKE KUDLULISE US $ 1,000.00 NGENHLONIPHO YOKUTHENGA KANYE KWEZIMALI.
NIYAVUMELANA UKUTHI ASIZOBA NESIBOPHO (a) NGOKWENZEKA, NGOKUKHETHEKILE, NGOKUQHELEKILE, NGOKULANDELANA, NGOKWESIBONELO, NGOKUKHETHEKA, NOMA NGOKULIMALA OKUHLAWULAYO, NOMA UKULAHLEKELWA KWENZUZO NOMA ITHUBA; NOMA (b) IZIMANGALO, IZIMANGALO, NOMA IZENZO ZONKE IZIMANGALO ZOKUBHALISWA EZLETHWE YI-CARRIER YAKHO YOMSHUWALENSE, KUSO SONKE ISIHLUKU ESIHAMBISANA NOKUTHUTHA KWABANYE, IMERCHANDISE, ISITE, NOMA YILUPHI OLUNYE LWEZINHLELO EZINIKEZELWA YI-WATCH RAPP UCHAZA NGOKUCACILE NANGOKUKHULULEKILE NOMA YILUPHI ISICELO SOKUBHALISA ESIMANGALWENI SAKHO NGAKHO KANYE NAKWEGAMA LOMTHWALASIWENSE WAKHO WOMSHWALENSE.
IMITHETHO ETHILE YOMBUSO AYIKUVUMELI UKUBEKELWA KWIZIQINISEKISO EZITHOLAKALISIWE NOMA UKUKHISHWA NOKUKHALELWA KOMONAKALO OTHILE. UMA LE MITHETHO IYASEBENZA KUWE, EMINYE NOMA YONKE YALEYO EPHEZULU YOKUTHOLA IZIMPAHLA, UKUKHISHWA, NOMA UKUKHAWULWA KUNGENZEKE KUSETSHENZISWE KUWE, FUTHI UNGABE NAWE AMALUNGELO ANGAPHEZULU.
Ngaphandle kokukhawulela isigwebo esibi, uyavuma ukuthi imikhawulo engenhla yesikweletu kanye neminye imibandela ekule Migomo Yokusetshenziswa ekhawulela isikweletu yimibandela ebalulekile yale Migomo Yokusetshenziswa nokuthi iWatch Rapport ngeke ivume ukukunikeza amalungelo abekiwe kule Migomo Yokusetshenziswa kodwa ngesivumelwano sakho kule mikhawulo engenhla yesikweletu. Uyavumelana nale mikhawulo yesikweletu ukunxenxa i-Watch Rapport ukuthi ikunikeze amalungelo abekwe kule Migomo Yokusetshenziswa.
Uyavuma ukuvikela, uvikele futhi ubambe i-Watch Rapport engenabungozi, izikhulu zayo, abaqondisi, abaphathi, amalungu, abasebenzi, abameli, amanxusa, abahlanganyeli, abanikezeli bamalayisense nabahlinzeki (bebonke "Amaphathi Azibophezelekayo") kusuka kunoma yikuphi nanoma yiziphi izimangalo, izindleko , umonakalo, ukulahlekelwa, izindleko, izinhlawulo, nezinhlawulo, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, izimali zabameli ezifanele, ezitholwe yinoma yimaphi ama-Indemnified Parties avela noma avela noma ahlobene nanoma yikuphi ukwephulwa noma ukwephulwa kwale Migomo Yokusetshenziswa nguwe noma noma ngubani omele wena, noma ukwephula kwakho noma yimaphi amalungelo ovela eceleni, noma ukusetshenziswa okungagunyaziwe Kwezinsizakalo, noma ubudedengu bakho noma ukungaziphathi ngamabomu noma ngenxa yolwazi olungelona iqiniso noma oludukisayo olunikezwe nguwe I-Rapport (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo izethulo zakho kanye neziqinisekiso zakho zokubuka i-Rapport ngokuphathelene nobunikazi be-Merchandise negunya lakho lokuthengisa okuthengiswayo ku-Watch Rapport).
Ukulamula kanye nokuyekelwa kwesigaba sekilasi.
Lesi Sigaba sifaka isivumelwano sokulamula kanye nesivumelwano sokuthi zonke izimangalo zizolethwa kuphela kumuntu ngamunye (hhayi njenge-Class Action noma enye inqubo emele). Sicela uyifunde ngokucophelela. Ungakhetha ukuphuma esivumelwaneni sokulamula ngokulandela inqubo yokukhetha ukuphuma echazwe ngezansi.
I-Class Action Waiver: Noma isiphi isimangalo (njengoba kuchaziwe ngezansi) kufanele silethwe kumuntu ngamunye weqembu, hhayi njengommangali noma ilungu lesigaba kunoma yiliphi iqembu okushiwo, elihlangene, elimele, labamangali abaningi, noma inqubo efanayo (“Class Action”) . Amaqembu azwakalisa ngokusobala noma yiliphi ikhono lokugcina noma iyiphi i-Class Action kunoma yisiphi isithangami. Uma Isimangalo singaphansi kokulamula, umlamuli ngeke abe negunya lokuhlanganisa noma lokuhlanganisa izimangalo ezifanayo noma enze noma iyiphi i-Class Action noma enze umklomelo kunoma imuphi umuntu noma inhlangano engeyona ingxenye yalowo olamula. Noma isiphi isimangalo sokuthi konke noma ingxenye yalokhu kukhishwa kwesigaba asinakuphoqelelwa, akuqondakali, kuyize, noma kungavunywa kunganqunywa kuphela yinkantolo yamandla afanele hhayi umlamuli. Amaqembu ayaqonda ukuthi noma yiliphi ilungelo lokumangalela enkantolo, lokuba nejaji noma ijaji lithathe isinqumo ngecala labo, noma ukuba yingxenye yesigaba noma isenzo sabamele, liyasuswa, nokuthi noma yiziphi izimangalo kufanele zinqunywe ngawodwana, ngokulamula.
Uma lokhu kukhishwa kweClass Action kutholakala ukuthi akunakuphoqeleka, khona-ke lonke iSivumelwano Sokulamula, uma sisebenza ngenye indlela, ngeke sisebenze. Umlamuli anganikeza usizo lokumemezela noma lokujezisa esivuna kuphela umuntu ngamunye ofuna ukukhululeka futhi kuze kube sezingeni lapho kudingeka khona ukuhlinzeka ngosizo olugunyazwe yilokho okushiwo yilelo qembu. Uma ngasizathu simbe isimangalo siqhubeka enkantolo kunokulamula, wena neWatch Rapport ngamunye nilekela noma yiliphi ilungelo lokuqulwa kwecala labasizi bejaji.
1. Inqubo Engakahleleki Okokuqala. Uyavuma ukuthi uma kungaba nokuphikisana phakathi kwakho neWatch Rapport, uzoqala uxhumane neWatch Rapport bese wenza imizamo ethembekile yokweseka ukuxazulula impikiswano ngaphambi kokusebenzisa izindlela ezisemthethweni zokuxazulula, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo isenzo senkantolo.
2. Isivumelwano Sokulamula. Ngemuva kwenqubo yokuxazululwa kwengxabano engahlelekile, noma iyiphi ingxabano, impikiswano, noma isimangalo (ngokuhlangene, “Isimangalo”) esiphathelene nganoma iyiphi indlela ekusebenziseni kwakho Izinsizakalo kanye / noma Okuthengiswayo kwe-Watch Rapport, kufaka phakathi Izinsizakalo, noma okuhlobene nganoma iyiphi indlela ukuxhumana phakathi kwakho neWatch Rapport noma omunye umsebenzisi Wezinsizakalo, ekugcineni kuzoxazululwa ngokulamula okubophayo. Lesi sivumelwano sokulamula esiyimpoqo sisebenza ngokufanayo kuwe naku-Watch Rapport. Kodwa-ke, lesi sivumelwano sokulamula (a) asilawuli noma yisiphi isimangalo se-Watch Rapport sokwephulwa kwempahla yaso yengqondo noma ukufinyelela kumasevisi okungagunyaziwe noma okudlula ukugunyazwa okunikezwe kule Migomo Yokusetshenziswa noma (b) ukukuvimbela ekusebenziseni okusebenzayo izinqubo ezincane zenkantolo ezimeni ezimeni ezifanele.
Ukulamula akwenzeki ngokwedlula icala enkantolo. Alikho ijaji noma ijaji ekusombululeni. Esikhundleni salokho, impikiswano ixazululwa ngumlamuli ongathathi hlangothi. Ukubuyekezwa kwenkantolo komklomelo wokulamula kunqunyelwe. Ngaphandle kokuthi amaqembu avumelana ngenye indlela, abahluleli bangakhipha umonakalo kanye nempumuzo enganikezwa yinkantolo. Kodwa-ke, uyavuma ukuthi uMlamuli ngeke abe nelungelo lokukhipha umonakalo olandelanayo, wokujezisa, wokuqagela, ongaqondile, ohilelekile, okhethekile noma oyisibonelo. Uyavuma ukuthi i-US Federal Arbitration Act ilawula ukutolikwa nokuphoqelelwa kwalokhu kuhlinzekwa, nokuthi wena ne-Watch Rapport nililahla ilungelo lokulingwa yijaji noma ukubamba iqhaza ku-Class Action. Uyavuma ngokusobala ukuthi noma yimuphi uMlamuli onjalo unamandla okuphatha. Uyeka konke ukuzivikela kokuntuleka kwegunya lomuntu siqu kanye nesithangami esingesihle. Uyavuma ukuthobela zonke izinqumo nemiklomelo enikezwe enkambisweni enjalo yokulamula, nokuthi lezo zinqumo nemiklomelo enikezwe uMlamuli kufanele ibe ngeyokugcina futhi iphelele. Lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzosinda kunoma yikuphi ukuqedwa kwale Migomo Yokusebenzisa.
Uma ufisa ukuqala ukuqhubeka komlamuleli, ngemuva kokulandela inqubo yokuxazululwa kwezingxabano engahlelekile, kufanele uthumele incwadi ecela ukulamulwa futhi uchaze isimangalo sakho ku-297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449. Ukulamula kuzokwenziwa yi-the I-American Arbitration Association (AAA) ngaphansi kwemithetho yayo kufaka phakathi, uma ungumuntu, izinqubo ezengeziwe ze-AAA zezingxabano ezihlobene nabathengi. Uma ungeyena umuntu noma usebenzise izinsizakalo egameni lebhizinisi, izinqubo ezengeziwe ze-AAA zezingxabano ezihlobene nabathengi ngeke zisetshenziswe. Imithetho ye-AAA iyatholakala ku-www.adr.org noma ngokushayela ku-1-800-778-7879.
Inani labaxazululi lizoba linye. Ungakhetha ukuthi ukulamula kwenziwe ngocingo, ngokuya ngokuthunyelwa okubhaliwe. Ukulamula kuzokwenziwa eLake Tahoe (Stateline), NV. Umbango uzokwenziwa ngolimi lwesiNgisi. Imithetho ye-AAA nemithetho yezwe laseNevada, ngaphandle kwemithetho yayo yokushayisana komthetho, ilawula le Migomo Yokusebenzisa kanye nokusebenzisa kwakho Izinsizakalo. Isinqumo somklomelo owenziwe ngumlamuli singafakwa kunoma iyiphi inkantolo enamandla okulawula.
Ukukhokhwa kwazo zonke izindleko zokufaka amafayili, ukuphatha nezokulamula kuzolawulwa yimithetho ye-AAA. Wena kanye nathi sizokhokha imali yokuphatha kanye neyokulamula kanye nezinye izindleko ngokuya ngemithetho esebenzayo yokulamula, kepha uma imithetho yokulamula esebenzayo noma imithetho idinga ukuthi iWatch Rapport ikhokhe ingxenye enkulu noma yonke leyo mali nezindleko ukuze lesi sigaba sikwazi kusebenze, khona-ke iWatch Rapport izoba nelungelo lokukhetha ukukhokha imali nezindleko bese iqhubeka ngokulamula noma ukwenqaba ukwenza kanjalo nokuthi udaba luxazululwe ezinkantolo. Iqembu elibusayo lizoba nelungelo lokukhokhelwa izindleko, imali ekhokhwayo yabameli, engafakwa yinkantolo esenzweni esifanayo noma kwesinye isenzo esilethelwe leyo nhloso, ngaphezu kokunye ukukhululeka lelo qembu elingaba nelungelo lalo.
Umlamuli, hhayi inkantolo yombuso, noma inkantolo yendawo, izoba negunya elikhethekile lokuxazulula noma yiziphi izingxabano eziphathelene nokuchazwa, ukusebenza, ukungaziboni, ukulamula, ukuphoqelela, noma ukwakhiwa kwalesi sivumelwano sokulamula, kufaka phakathi noma yisiphi isimangalo sokuthi konke noma ingxenye ethile salesi sivumelwano sokulamula asisebenzi noma asisebenzi. Kodwa-ke, isigwebo esandulele ngeke sisebenze engxenyeni engezansi ye- "Class Action Waiver".
Uma ungafuni ukusombulula izingxabano neWatch Rapport futhi ungumuntu, ungakhetha ukuphuma kulesi sivumelwano sokulamula ngokuthumela incwadi ku-297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 kungakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu (30) usuku lokuqala othola ngalo noma osebenzisa ngalo izinsiza.
1. Qaphela. Ngalokhu uyavuma futhi uyavuma ukuthi usinikeze ikheli le-imeyili, ikheli lendawo, nezinombolo zocingo ezikumarekhodi ethu, futhi kungumsebenzi wakho ukusinikeza nganoma yiluphi ulwazi lwamanje noma olusha lokuxhumana. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi: (i) noma imuphi umyalezo we-imeyili esiwuthumela kuwe uthathwa njengokuthi uwuthole ngempumelelo futhi wenza isaziso esifanele kuwe nge-imeyili; futhi (ii) noma yimuphi umlayezo wefoni esiwushiyela wona, noma ngubani ophendula ifoni yakho, noma kumshini wakho wokuphendula noma isevisi wamukelwa kahle nguwe futhi wenza isaziso esifanele ngocingo.
2. Buyisela Shipper. Uma kwenzeka kuba khona noma yisiphi isiteleka, ukuphazanyiswa kwensizakalo, noma ezinye izinkinga esingase sihlangane nazo nge-Shipper, sigcina ilungelo ngokubona kwethu lokufaka uShipper ngomunye umphathi wemikhumbi.
3. Imithetho Yokuthekelisa. Uyavuma ukuthi ngeke ukhiphele noma uthumele kabusha, ngqo noma ngokungaqondile Amasevisi kanye / noma eminye imininingwane noma izinto ezihlinzekwa yi-Watch Rapport ngezansi, kunoma yiliphi izwe i-United States noma elinye igunya elifuna ilayisense yokuthumela ngaphandle noma omunye uhulumeni imvume ngesikhathi sokuthumela ngaphandle kokuthola leyo layisense noma imvume. Ikakhulu, kodwa ngaphandle komkhawulo, Izinsizakalo angeke zithunyelwe noma zithunyelwe kabusha (a) kunoma yimaphi amazwe avinjelwe e-US noma kunoma yiliphi izwe eliqokwe nguHulumeni wase-US njengezwe “elisekela amaphekula”, noma (b) kunoma ngubani efakwe ohlwini kunoma yiluphi uhlu lukaHulumeni wase-US lwamaqembu angavumelekile noma anqatshelwe, kufaka phakathi uhlu loMnyango Wezezimali wase-US Labahlali Abakhethekile Ngokukhethekile noma Uhlu Lomuntu Olwenqatshiwe Lwezohwebo noma Uhlu Lwamabhizinisi. Ngokusebenzisa Izinsizakalo, umele futhi uqinisekisa ukuthi awutholakali kunoma yiliphi izwe elinjalo noma kunoma yiluphi uhlu olunjalo. Uyavuma futhi ukuthi ngeke usebenzise le mikhiqizo nganoma yiziphi izinhloso ezingavunyelwe umthetho wase-United States, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukwakhiwa, ukuklanywa, ukwenziwa noma ukukhiqizwa kwezikhali zenuzi, imicibisholo, noma izikhali zamakhemikhali noma zebhayoloji. Ubophezelekile futhi ngalokhu uyavuma ukuthobela ngezindleko zakho kuphela yonke imithetho nemithethonqubo esebenzayo yase-United States yokuthumela izinto kwamanye amazwe.
4. Amalungelo Akhawulelwe Kahulumeni wase-US. Izinsizakalo nemibhalo ehlobene nazo “Izinto Zentengiselwano”, njengoba lelo gama lichazwa ku-48 CFR § 2.101, equkethe i- “Commercial Computer Software” kanye ne- “Commercial Computer Software Documentation”, njengoba lawo magama esetshenziswa ku-48 CFR § 12.212 noma 48 CFR § 227.7202, njengoba kusebenza. Ngokuhambisana ne-48 CFR § 12.212 noma i-48 CFR § 227.7202-1 ukuya ku-227.7202-4, njengoba kusebenza, iComputer Computer Software kanye neCommercial Computer Software Documentation zinikezwe ilayisense kubasebenzisi bakaHulumeni baseMelika (a) kuphela njengezinto Zentengiso kanye (b) ne kuphela lawo malungelo anikezwe bonke abanye abasebenzisi bokugcina ngokuya ngemigomo nemibandela elapha.
5. Isivumelwano seZizwe Ezihlangene. Wena neWatch Rapport niyavuma ukuthi Isivumelwano Sezizwe Ezihlangene Sezinkontileka Zokuthengiswa Kwempahla Yomhlaba Wonke ngeke sisebenze ekutolikweni noma ekwakhiweni kwale Migomo Yokusetshenziswa.
6. UMnyango Wezindaba Zabathengi. Ngaphansi kweCalifornia Civil Code Isigaba 1789.3, abasebenzisi beCalifornia bathola lesi saziso samalungelo abathengi alandelayo: IYunithi Yosizo Lwezikhalazo yeDivision of Consumer Services yoMnyango Wezindaba Zabathengi eCalifornia ingathintwa ngencwadi ngo-1625 North Market Boulevard, Suite N 112 Sacramento, CA 95834, noma ngocingo ku- (800) 952-5210.
7. Ukunqanyulwa. Uma wephula noma yimiphi imigomo yale Migomo Yokusetshenziswa, wonke amalayisense anikezwe yi-Watch Rapport, kufaka phakathi imvume yokusebenzisa amasevisi, azonqamuka ngokuzenzekelayo. Ngokwengeziwe, i-Watch Rapport ingamisa okwesikhashana, ikhubaze, noma isuse i-Akhawunti yakho Yomsebenzisi kanye / noma Nezinsizakalo (noma enye ingxenye yalokhu okungenhla) noma ngaphandle kwesaziso, nganoma yisiphi isizathu noma ngaphandle kwesizathu. Uma i-Watch Rapport isusa i-Akhawunti Yakho Yomsebenzisi nganoma yikuphi okusolwayo okuphula le Migomo Yokusetshenziswa nguwe, uvunyelwe ukubhalisela kabusha Izinsizakalo ngaphansi kwegama elehlukile. Uma kwenzeka kususwa i-Akhawunti Yomsebenzisi nganoma yisiphi isizathu, i-Watch Rapport, kodwa ayiphoqelekile, ukuthi isuse noma yikuphi okuqukethwe kwakho. I-Watch Rapport ngeke ibe nesibopho sokususa (noma ukwehluleka ukususa) okuqukethwe kwakho. Zonke izigaba okufanele ngokwemvelo yazo zisinde ekunqanyulweni kwale Migomo Yokusetshenziswa zizoqhubeka nokusebenza ngokugcwele nangokulandela noma ngabe yikuphi ukuqedwa kwalesi Sivumelwano yiWatch Rapport noma nguwe. Ukunqanyulwa ngeke kukhawulele noma yimaphi amanye amalungelo noma amakhambi weWatch Rapport asemthethweni noma ngokulingana.
8. Ukuyekelela. Kuqondakala ngokusobala ukuthi esimweni lapho noma yiliphi iqembu kunoma isiphi isikhathi lihluleka ukwenza noma yiliphi igama lapha futhi elinye iqembu lingaphoqeleli lelo thuba, ukwehluleka ukuphoqelela kunoma isiphi isenzakalo ngeke kuveze ukuyekelwa kwanoma yiliphi igama futhi ngeke kuvimbele ukuphoqelelwa noma yimuphi omunye umcimbi.
9. Ukungavumeleki kancane. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalokhu kwenzeka noma kuba, nganoma yisiphi isikhathi noma nganoma yisiphi isizathu, kungaphoqeleleki noma kungasebenzi, akukho okunye ukuhlinzekwa kwalokhu okuzothinteka ngalokho futhi izinhlinzeko ezisele zizoqhubeka nomphumela ofanayo njengokungathi izinhlinzeko ezingenakuphoqeleka noma ezingavumelekile ngeke zifakwe lapha; inqobo nje uma ikhono leqembu ngalinye lokuthola okunciphisiwe kokusebenza kwelinye ngeke lize likhubazeke.
10. Ukuguqulwa. Singashintsha le Migomo Yokusetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi. Ukulungiswa kusebenza ngokushesha lapho ufinyelela noma usebenzisa kuqala Izinsizakalo ngemuva kosuku "Lokubuyekezwa Ekugcineni" phezulu kwale Migomo Yokusebenzisa. Uma senza ushintsho olubalulekile, singasebenzisa imizamo efanelekile yokuzama ukukwazisa, kufaka phakathi i-imeyili noma ukufaka isaziso esivelele kwiWebhusayithi. Kodwa-ke, kungumsebenzi wakho kuphela ukubuyekeza Imigomo Yokusebenzisa ngezikhathi ezithile ukubuka noma yiziphi izinguquko ezinjalo. Ukufinyelela kwakho okuqhubekayo noma ukusetshenziswa Kwensizakalo ngemuva kokuthi ukulungiswa sekuqalile ukusebenza kuzothathwa njengokuvuma kwakho okuphelele kweMigomo Yokusebenzisa eguquliwe. Uma ungavumelani nokuguqulwa Kwemigomo Yokusetshenziswa, sicela ungafinyeleli noma usebenzise Amasevisi.
11. Osonkontileka Abazimele. Akukho lutho oluqukethwe kule Migomo Yokusetshenziswa oluzothathwa njengolwenza noma yiliphi iqembu njengomenzeli noma omele elinye iqembu noma womabili amaqembu njengabahlanganyeli noma abalingani nganoma iyiphi injongo.
12. Izintela. Nguwe kuphela obhekele noma yimuphi umsebenzi nayo yonke imisebenzi, izintela, izimali ezikhokhiswayo noma izimali (kufaka phakathi noma ikuphi ukuthengisa, ukusetshenziswa noma ukubamba izintela) okubekwe noma ngokuhlobene nale Migomo Yokusetshenziswa yinoma yimuphi umphathi.
13. Izihloko namazwibela. Izihloko namazwibela kufakwa ukuze kusetshenziswe futhi kube lula kuphela futhi akuchazi, kukhawulele noma kuchaze ubukhulu bale Migomo Yokusetshenziswa noma inhloso yanoma yikuphi ukuhlinzekwa.
14.Ukukhululeka Okuhlangene. Uyavuma ukuthi ukwephulwa kwale Migomo Yokusetshenziswa kuzodala ukulimala okungenakulungiseka kuWatch Rapport lapho umonakalo wezimali ubungeke ube yikhambi elanele futhi iWatch Rapport izoba nelungelo lokuthola usizo olulinganayo ngaphezu kwanoma iziphi izixazululo okungenzeka zinazo ngezansi noma ngokomthetho ngaphandle isibambiso, okunye ukuphepha noma ubufakazi bemonakalo.
15. Phoqelela uMajeure. Ayikho i-Watch Rapport futhi ngeke ube nesibopho sokulimala noma sokubambezeleka noma ukwehluleka kokusebenza okuvela ezenzweni noma ezenzweni ezingaphezu kwamandla abo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo: ubhadane, umlilo, umbani, ukuqhuma, ukuqhuma kwamandla noma ukwehluleka, amanzi, izenzo zikaNkulunkulu , impi, ukuvukela umbuso, isiyaluyalu somphakathi noma izenzo zeziphathimandla zomphakathi noma zamasosha noma izitha zomphakathi: noma imuphi umthetho, ukuhleleka, umthethonqubo, umthetho, noma imfuneko yanoma yimuphi uhulumeni noma umgwamanda wezomthetho noma omele noma yimuphi lowo hulumeni noma leyo nhlangano yezomthetho; noma izinxushunxushu zabasebenzi, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, iziteleka, ukwehla, ukuteleka, noma ukuduba; ukungakwazi ukuthola izinto zokwakha, izinto zokuhamba, ukushoda kukaphethiloli noma amandla, noma ukwenza noma ukweqelwa kwezinye izinto ezijwayelekile.
16. Izabelo. Awungeke unikeze noma udlulise le Migomo Yokusetshenziswa, iphelele noma ingxenye, ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi ye-Watch Rapport. Noma imuphi umzamo wokunikeza le Migomo Yokusetshenziswa, ngaphandle kwemvume enjalo, uyoba yize. Ngokukhonjwe kulokhu okungenhla, le Migomo Yokusetshenziswa izobopha futhi izuzise amaqembu nalabo abafinyelela kuwo futhi bababele.
17. Ukungacaci. Noma ikuphi ukungaqondakali ekuchazweni kwale Migomo Yokusetshenziswa ngeke kuthathelwe eqenjini elibhalayo.
18. Isivumelwano Sonke. Le Migomo Yokusetshenziswa ibeka konke ukuqonda kwamaqembu maqondana nezindaba eziqukethwe lapha futhi azikho izithembiso, izivumelwano noma izithembiso ngaphandle kwalezo ezichazwe lapha.
19. Thintana Nathi. Ungaxhumana nathi maqondana nezinsizakalo noma le Migomo Yokusetshenziswa ku: 297 Kingsbury Grade, Suite 100 Lake Tahoe (Stateline) NV 89449 noma nge-imeyili ku-help@watchrapport.com.
20. Isaziso se-copyright. Konke ukwakhiwa kweSayithi, ihluzo, ukukhetha umbhalo, ukuhlelwa kanye nawo wonke ama-software yi-Copyright © 2020 Watch Rapport, LLC. WONKE AMALUNGELO AGODLIWE.
Inqubomgomo Yemfihlo Yedatha
I-Watch Rapport izinikele ekuhlinzekeni amakhasimende ayo ngensizakalo ehlukile kanye nokwaneliseka kwamakhasimende okungenakuqhathaniswa. Ukwenza lokho, sizokwamukela ngenjabulo ukubuyiselwa okufanele kungakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela osukwini owathola ngalo iwashi lakho.
Yonke imbuyiselo (ngaphandle kwento eyonakele) kufanele imakwe phakathi nezinsuku ezingama-30 zokulethwa (ukulethwa kuchazwa njengalapho usayina ukuthi ulitholile lelo washi).
Uma iwashi lilethwe lilimele, ungalibuyisa lelo washi futhi kufanele limakwe phakathi nezinsuku eziyi-7 selifikile (ukulethwa kuchazwa njengalapho usayina ukuthi uyitholile leyo nto).
Zonke izinto ezibuyisiwe kumele zibe sesimeni esifanayo ngqo, kufaka phakathi wonke amathegi, amabhokisi, izincwadi, izitika, izimpawu nezisonga, ukupakisha nezinye izinsiza.
Leyo nto ayifanele ukugqokwa, ukuphazanyiswa noma ukwehliselwa isithunzi nganoma iyiphi indlela.
Lapho itholwa, into ebuyisiwe izohlolwa ngomunye wochwepheshe bethu ukuqinisekisa ukuthi leyo nto isesimweni sokuqala eyayithengiselwe yona nokuthi ifaka wonke amathegi, izinto, izesekeli, njll., Ngaphambi kweWatch Rapport izokhipha imali ebuyiswayo.
Uma into ebuyisiwe itholakala ukuthi yehliswe isithunzi nganoma iyiphi indlela, iwashi lakho ngeke lifanelekele ukubuyiselwa imali.
I-Watch Rapport ayinasibopho somonakalo omusha noma okokugqoka entweni yakho ngemuva kokuthenga. E-Watch Rapport, izinto eziningi zinabanikazi bokuqala futhi asikwazi ukuhlonipha noma yiziphi iziqinisekiso eziqondene nomkhiqizo njengoba singeyona ingxenye yenqubo yokukhiqiza. Ochwepheshe bethu baqeqeshwe kahle ukubheka noma yiziphi izimpawu zokugqoka noma zomonakalo kepha abakwazi ukubona ukuthi ukusetshenziswa kwesikhathi esizayo kuzoba nomthelela muni kunoma iyiphi into.
Ungayiphatha kanjani imbuyiselo yakho
Ungaphatha ukubuya kwakho ngokuya ezansi kwekhasi ku-Watch Report bese uchofoza ku- “Easy Returns”.
Lokho kuzokuletha ku- "Return Center" yethu, faka inombolo yakho ye-oda nekheli le-imeyili.
Landela imiyalo bese ukhetha into ofuna ukuyibuyisa.
Lapho isicelo sakho sesivunyiwe, uzothola isiqinisekiso esithunyelwe nge-imeyili kuwe nemihlahlandlela yokuthumela.
Ngenxa yohlobo lwenqubo yokuhlola, sicela waziswe ukuthi ukuvunywa ngokuvamile kuthatha okungenani izinsuku eziyi-10. Uma sesivunyiwe, isicelo sakho sokubuyiselwa imali sizocutshungulwa ngokushesha.
Yonke imbuyiselo izokhokhiswa imali engu-10% yokwenza kabusha, ngaphandle uma imbuyiselo yakho ingoba into leyo bekungukuthi:
hhayi njengoba kuchaziwe; konakele; noma umfanekiso.
Uzobuyiselwa imali ngokususelwa endleleni yakho yoqobo yokukhokha.
Uma uguqula Amabhange phakathi kokuthenga nokubuyisa leyo nto, kungumsebenzi wakho ukuxhumana nesikhungo sakho sangaphambilini sasebhange ubazise ukuthi kuzobuyiselwa imali kwi-akhawunti.
Samukela izimbuyiselo kuma-oda aphesheya. Ukuthunyelwa kwamazwe omhlaba nakho konke ukubuya kwezinto ezithunyelwa emhlabeni wonke kuzokwenziwa ngamaDola aseMelika kuphela nangemali efanayo yeDola laseMelika esikhokhelwe yona ngesikhathi soku-oda. Asikwazi ukunikeza noma yiziphi izilinganiso zokushintshaniswa kwemali njengoba la mazinga ehla enyuka njalo. Konke okwenziwayo kungaphansi kwesilinganiso sokushintshaniswa ngesikhathi sokucutshungulwa futhi kunqunywa yizikhungo zezimali ezingumlamuli. Asenzi ukulungiswa kokushintshaniswa kwemali ekubuyiseni.
I-Watch Rapport inikeza ukuthunyelwa kwamahhala kumakhasimende ayo emhlabeni jikelele.
Sisebenzisa i-FedEx, i-DHL, i-UPS ne-Malca-Amit njengezithwali zethu esizethembayo ekuthengeni kwakho; inomshuwalense ngokuphelele ekulahlekelweni, ukwebiwa kanye nasekulimaleni. Buka iRapport iqinisekisa ukuthenga ngakunye ngesikhathi isendleleni ize ithunyelwe kuwe. Ngenxa yenani lokuthengiwe kwakho nokuvikelwa kwakho kanye nezizathu zomshuwalense, sidinga ukusayinwa ngumuntu omdala (oneminyaka engu-18 ubudala noma ngaphezulu) ukuqinisekisa ukwamukela kwakho umkhiqizo ngamunye olethwe, lapho umthwalo wemfanelo wentengo yakho oyithengile udlulela ku- wena. Uma ucacisile umamukeli ongeyena ngezinhloso zokulethwa (isibonelo njengesipho) uyaqonda-ke futhi ubamukele lobo bufakazi besiginesha yalowo owamukelayo (noma kulelo kheli lokuletha) ubufakazi bokulethwa nokugcwaliseka kwenkontileka yokuthengisa nge-Watch Rapport nokudlulisela umthwalo wemfanelo kumamukeli ngendlela efanayo nokuthi okuthengisiwe kulethwe kuwe. Lapho sesikuthumele futhi sathola inombolo yoku-oda yokulandela ngomkhondo, sizokuthumelela i-imeyili inombolo yokulandelela ukuze ubheke isimo sephakeji lakho.
Sicela waziswe ukuthi ukuthenga kwakho akukwazi ukuphindiselwa kwenye indawo noma ukugcinwa endaweni yenethiwekhi ukuze kulandwe kuyo. Ngokwengeziwe, ngokudabukisayo ngalesi sikhathi, i-Watch Rapport ayikwazi ukuletha kuma-APO, ama-FPO nama-PO Boxes.
Uyacelwa ukuthi ukhumbule ukuthi uma usufake i-oda lakho, sizosebenza ngokushesha ukuvikela iwashi lamaphupho akho, lihlolwe kahle futhi ligunyazwe. Uma inqubo isiqediwe sizokuthumela ukuthenga kwakho okuvame ukuba phakathi kwamahora angama-48 ngezikhathi ezijwayelekile zokusebenza ngoMsombuluko-Fri ngo-9: 00 ekuseni - 5: 00 PM.
Ukuthumela Kwamanye Amazwe.
I-Watch Rapport inikeza ukuthunyelwa ngaphandle kwe-United States. Akuwona wonke amazwe avumela izinto zikanokusho kanjalo; kungumsebenzi wakho wedwa ukuqinisekisa ukuthi ukuthenga kwakho kungangeniswa ngokusemthethweni ezweni oya kulo.
Noma yikuphi ukukhokhiswa kwamasiko, imisebenzi yokungenisa nokuthekelisa, noma ezinye izimali nezintela ezisebenza kuma-oda wokuthumela aphesheya kungumthwalo wakho kuphela, noma ngabe wenqaba ukuthunyelwa lapho ulethwa. Amanye amazwe akhokhisa imali eyengeziwe yokuqoqwa kwe-Collect on Delivery (COD), eqoqwa ngumthwali ngesikhathi sokulethwa. Azikho izindleko ze-COD eziya ku-Watch Rapport. Sicela waziswe, ukuthi singanikeza othwala bamazwe ngamazwe imininingwane yomkhiqizo, kufaka phakathi izindleko (asikwazi ukufaka ilebula entweni njengesipho noma ukumemezela inani elingaphansi kwenani lokuthenga langempela), kanye negama lomthengi nekheli noma omunye oxhumana naye imininingwane, ukuze imininingwane inganikezwa amasiko wendawo noma iziphathimandla zeposi, kuze kufike ezingeni elidingekayo ngaphansi kwemithetho nemithethonqubo yezwe oya kulo.
Kwezinye izimo, abaphathi bamasiko bangaba nelungelo lokulibazisa noma benqabe ukulethwa kwephakeji lakho; I-Watch Rapport ngokusobala ayinamandla okulawula lokho; kodwa-ke sizama ukunciphisa amathuba okuthi kwenzeke ngokuthumela ngabathwali bamazwe aphesheya abethembekile njengeFedEx, i-DHL, i-UPS, neMalca-Amit. Ngeminye imininingwane ngokuthunyelwa kwamanye amazwe ezweni lakho, sicela uxhumane nehhovisi lakho lendawo lendawo. Uma unezinye izinkinga noma ukukhathazeka ngokuthumela, sicela uxhumane nathi ku-help@watchrapport.com.
Inqubomgomo Yedatha Yamakhukhi
IHhovisi loMnyango Wezezimali Lokuphathwa Kwezimpahla Zangaphandle (OFAC)
IHhovisi loMnyango Wezezimali Lokuphathwa Kwezimpahla Zangaphandle (i-OFAC) liphatha futhi liphoqelele unswinyo lwezomnotho olubekwe yi-United States emazweni angaphandle. Ngokuya ngezwe, izinhlelo ze-OFAC zingamisa impahla yamazwe avinjelwe, zivimbele ukukhokhwa kwezimali kubantu nakwamanye amazwe asohlwini lwe-embargo, noma zivimbele ukuhlinzekwa kwezinsizakalo emazweni angaphansi kwezijeziso zase-US. Lezi unswinyo zingadinga ukuthola imvume ye-OFAC ngaphambi kokwenza ucwaningo noma eminye imisebenzi noma efaka izwe elijezisiwe. Ezinye unswinyo zinemikhawulo kakhulu kunezinye, futhi zisebenza ezweni lonke, kanti ezinye zibhekiswe kubantu abathile noma izinhlangano ezithile ezweni. Njengamanje, amazwe avunyelwe afaka phakathi iBalkans, Belarus, Burma, Cote D'Ivoire (Ivory Coast), Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria, kanye neZimbabwe. Uhlu lwamazwe avunyelwe libuyekezwa ngezikhathi ezithile futhi luyatholakala lapha.
I-Watch Rapport ihambisana nenqubomgomo ye-Office of Foreign Asset Control ("OFAC"), futhi ayikwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo kubantu abahlala emazweni anikezwe unswinyo oluthile. Uma uhlala eCuba, eNyakatho Korea, noma esifundeni saseCrimea e-Ukraine, i-Watch Rapport ayikwazi ukuqhuba ibhizinisi nawe.
I-Watch Rapport nayo ayikwazi ukwenza ibhizinisi nabantu noma nabasebenzi babaqashi ababhalwe ohlwini lwama-Specially Designated Nationals ("SDNs"), kungakhathalekile ukuthi bakuphi. Uma uzama ukubhalisa noma ukufaka i-oda ngaphandle kokujeziswa kwe-US okuvimba i-Watch Rapport ukuthi yenze ibhizinisi nawe, ngokomthetho kudingeka sikhansele ukubhalisa noma i-oda lakho. Bona iwebhusayithi ye-OFAC ukuthola imininingwane nokuvuselelwa kuzinhlelo zamanje zokujeziswa.
Ngenxa yezinqubomgomo zezinkampani zokuthumela zomhlaba wonke nezokuposa, ukulethwa kwamazwe athile kungahle kungatholakali. Sicela ubuze nenkampani yakho yenethiwekhi ukuthola ukuthi iyatholakala yini imali ngaphambi kokwenza i-oda lokuthenga.
Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi.
Inqubo Yokuqinisekisa ye-KYC
Uhlelo Lokulwa Nokushushumbisa Imali (i-AML):
Isitatimende senqubomgomo yokulwa nemali ngokulwa nemali nezinqubo zohlelo
Izinqubo Zokuhambisana Nezokuphatha ze:
Buka iRipport, LLC
I-297 Kingsbury Ibanga, iSuite 100 Lake
I-Tahoe (Isitatimende) NV 89449
Buka Uhlolojikelele Lwezinhlelo Zokushushumbisa Imali zeRipport
1. Thuthukisa izinqubomgomo zangaphakathi, izinqubo, nezilawuli
Le nkampani iqoke iPassbase AKA https://passbase.com/aml-compliance/ njengenkonzo yesoftware ye-Anti-Money Laundering Program Compliance, enesibopho esigcwele sohlelo lwenkampani i-AML. I-Passbase inolwazi olusebenzayo lwe-BSA kanye nemithethonqubo yayo yokusebenzisa futhi ifaneleke ngokuhlangenwe nakho, ulwazi nokuqeqeshwa, kufaka phakathi ukuqinisekiswa kwe-id, ukuhlolwa kwamakhasimende kanye ne-KYC. Imisebenzi yoMuntu Wokuhambisana kwe-AML izobandakanya ukuqapha ukuhambisana kwenkampani nezibopho ze-AML, ukwengamela ukuxhumana nokuqeqeshwa kwabasebenzi, kanye ne-KYC yamakhasimende. Umuntu Wokuhambisana ne-AML futhi uzoqinisekisa ukuthi inkampani igcina futhi iwagcine wonke amarekhodi e-AML adingekayo futhi izoqinisekisa ukuthi Imibiko Yemisebenzi Esolisayo (ama-SAR) ifakwa kwi-Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) lapho kufanele khona. Umuntu Wokuhambisana ne-AML unikezwe umthwalo ophelele negunya lokuphoqa uhlelo lwenkampani lwe-AML.
Le nkampani izonikeza i-FINRA imininingwane yokuxhumana noMuntu Ohambisana ne-AML ngohlelo lokuxhumana lwe-FINRA (FCS), kufaka phakathi: (1) igama; (2) isihloko; (3) ikheli leposi; (4) ikheli le-imeyili; (5) inombolo yocingo; kanye (6) ne-facsimile (uma ikhona). Inkampani izokwazisa i-FINRA ngokushesha nganoma yiluphi ushintsho kulolu lwazi nge-FCS futhi izobuyekeza, futhi uma kunesidingo, lolu lwazi zingakapheli izinsuku eziyi-17 zebhizinisi ngemuva kokuphela konyaka ngamunye wekhalenda. Ukubuyekezwa kwaminyaka yonke kwemininingwane ye-FCS kuzokwenziwa yiPassbase futhi kuzophothulwa lapho konke ukwaziswa okudingekayo kunikezwa kungakadluli izinsuku zebhizinisi eziyi-17 ngemuva kokuphela konyaka ngamunye wekhalenda. Ngaphezu kwalokho, uma kukhona ushintsho kulwazi, i-Passbase izovuselela imininingwane ngokushesha, kepha kunoma yisiphi isikhathi kungakadluli izinsuku ezingama-30 kulandela ushintsho.
2. Ukunikeza Ulwazi lwe-AML kuma-Agency Federal Enforcement Agencies nakwezinye Izikhungo Zezimali
a. Izicelo ze-FinCEN Ngaphansi kwe-USA PATRIOT Act Isigaba 314 (a)
Sizophendula isicelo se-Financial Crimes Enforcing Network (FinCEN) esiphathelene nama-akhawunti nokwenziwe (a 314 (a) Isicelo) ngokusesha ngokushesha amarekhodi ethu ukuthola ukuthi siyayigcina noma siyigcinile i-akhawunti, noma sihlanganyele kunoma yikuphi ukuthengiselana ne, umuntu ngamunye, inhlangano noma inhlangano eqanjwe ku-314 (a) Isicelo njengoba kuchaziwe ku-Imibuzo Ebuzwa Njalo (i-FAQ) etholakala kuwebhusayithi ephephile ye-FinCEN. Siyaqonda ukuthi sinezinsuku eziyi-14 (ngaphandle kwalapho kuchazwe ngenye indlela yi-FinCEN) kusukela osukwini lokudluliswa kwesicelo sokuphendula ku-314 (a) Isicelo. Sizokhetha ngokusebenzisa i-FINRA Contact System (i-FCS) umuntu oyedwa noma ngaphezulu ukuthi kube indawo yokuxhumana (i-POC) ye-314 (a) Izicelo futhi sizoyivuselela ngokushesha imininingwane ye-POC kulandela noma iluphi ushintsho kulolo lwazi. (Bheka futhi iSigaba 2 ngenhla maqondana nokuvuselelwa kolwazi lokuxhumana loMuntu Wokuhambisana ne-AML.) Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela ku-314 (a) Isicelo noma esichazwe yi-FinCEN, kudingeka ukuthi siseshe leyo mibhalo evezwe ku-FAQ ye-FinCEN. Uma sithola umentshisi, uCognito uzowubika kuFinCEN ngeFinCEN's Web-based 314 (a) Secure Information Sharing System zingakapheli izinsuku eziyi-14 noma ngesikhathi esicelwe yi-FinCEN esicelweni. Uma imingcele yokusesha yehlukile kunaleyo eshiwo ngenhla (isibonelo, uma i-FinCEN ikhawulela ukusesha endaweni ethile), i-Passbase izokwakha usesho lwethu ngokufanele.
Uma i-Passbase isesha amarekhodi ethu futhi ingayitholi i-akhawunti efanayo noma okwenziwayo, iPassbase ngeke iphendule ku-314 (a) Isicelo. Sizogcina imibhalo esenza usesho oludingekayo.
Ngeke silidalule iqiniso lokuthi i-FinCEN icele noma ithole imininingwane kithi, ngaphandle kwalapho kudingeka khona ukuhambisana nesicelo solwazi. I-Cognito izobuyekeza, igcine futhi isebenzise izinqubo zokuvikela ukuphepha nokugcinwa okuyimfihlo kwezicelo ezivela kwa-FinCEN ezifana nalezo zinqubo ezisungulelwe ukwanelisa izidingo zeSigaba 501 se-Gramm-Leach-Bliley Act maqondana nokuvikelwa kolwazi lwamakhasimende olungeyona olomphakathi.
Sizoqondisa noma yimiphi imibuzo esinayo mayelana ne-314 (a) Isicelo esiya ku-ejensi yokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho njengoba kuchaziwe esicelweni
Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela kusicelo esingu-314 (a), ngeke kudingeke ukuthi siphathe isicelo solwazi njengesiqhubeka ngokwemvelo, futhi ngeke kudingeke ukuthi siphathe i-periodic 314 (a) Izicelo njengohulumeni ezinikeze uhlu lwamaphekula asolwayo izinhloso zokuhlonza ikhasimende nezidingo zokuqinisekisa.
1. Izincwadi Zokuphepha Zikazwelonke
Siyaqonda ukuthi ukutholwa kweNcwadi Yezokuphepha Kazwelonke (i-NSL) kuyimfihlo enkulu. Siyaqonda ukuthi akekho noyedwa wezikhulu zethu, abasebenzi noma ama-ejenti angaveza ngqo noma ngokungaqondile kunoma yimuphi umuntu ukuthi i-FBI noma elinye igunya likahulumeni wesifundazwe lifune noma lathola ukufinyelela kunoma yimaphi amarekhodi ethu. Uma sifaka i-SAR ngemuva kokuthola i-NSL, i-SAR ngeke iqukathe noma iyiphi inkomba yokutholwa noma ukuba khona kwe-NSL. I-SAR izoqukatha kuphela imininingwane eningiliziwe mayelana namaqiniso nezimo zomsebenzi osolwayo otholakele.
2. IGreat Jury Subpoenas
Siyaqonda ukuthi ukwamukelwa kwesigcawu samajaji esikhulu esiphathelene nekhasimende akudingi ukuthi sifake i-Suspicious Activity Report (SAR). Lapho sithola i-jury subpoena enkulu, sizohlola ubungozi bekhasimende ngokuya ngesibizo futhi sibuyekeze nomsebenzi we-akhawunti yekhasimende. Uma sithola izinto ezisolisayo ngesikhathi sokuhlolwa kobungozi bethu nokubuyekezwa kwethu, sizokhuphula lelo qhinga lokuhlola ubungozi kwalelo khasimende bese sifaka i-SAR ngokuya ngezidingo zokugcwalisa ze-SAR. Siyaqonda ukuthi asikho esinye sezikhulu zethu, abasebenzi noma abenzeli abangadalula ngokuqondile noma ngokungaqondile kumuntu okucelwa ukuthi akhokhelwe, ukuthi okuqukethwe yikho noma ulwazi esilusebenzise uma siluphendula. Uma sifaka i-SAR ngemuva kokuthola isamanisi enkulu yamajaji, i-SAR ngeke iqukathe noma iyiphi ireferensi ekwamukelweni noma ekubanjweni kwesamanisi. I-SAR izoqukatha kuphela imininingwane eningiliziwe mayelana namaqiniso nezimo zomsebenzi osolwayo otholakele.
B. Ukwabelana Ngemininingwane Ngokuzithandela Nezinye Izikhungo Zezezimali Ngaphansi Komthetho Wepatrioti wase-USA Isigaba 314 (b)
Sizokwabelana ngolwazi nezinye izikhungo zezezimali maqondana nabantu, izinhlangano, izinhlangano kanye namazwe ngenhloso yokuhlonza futhi, lapho kufanele khona, ukubika imisebenzi esisola ukuthi ingahle ibandakanye izenzo zamaphekula noma ukukhwabanisa kwemali. I-Passbase izoqinisekisa ukuthi inkampani ifayela ne-FinCEN isaziso sokuqala ngaphambi kokuhlanganyela okwenzekayo nezaziso zonyaka ngemuva kwalokho. Sizosebenzisa ifomu lesaziso elitholakala kuwebhusayithi yakwaFinCEN. Ngaphambi kokuthi sabelane ngolwazi nesinye isikhungo sezezimali, sizothatha izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi esinye isikhungo sezezimali sithumele isaziso esidingekayo ku-FinCEN, ngokuthola ukuvumelana esikhungweni sezezimali noma ngokuthinta uhlu lwalezo zikhungo zezezimali i-FinCEN ezokwenza iyatholakala. Siyaqonda ukuthi le mfuneko isebenza ngisho nasezikhungweni zezezimali esixhumene nazo, nokuthi sizothola izaziso ezidingekayo kubanikazi bese silandela yonke imigudu edingekayo.
Sizosebenzisa izinqubo eziqinile zombili ukuqinisekisa ukuthi kwabiwa imininingwane efanelekile kuphela nokuvikela ukuphepha nokuyimfihlo kwalolu lwazi, ngokwesibonelo, ngokuluhlukanisa kwezinye izincwadi namarekhodi enkampani.
Sizosebenzisa nezinqubo ukuqinisekisa ukuthi noma yiluphi ulwazi olutholwe kwesinye isikhungo sezezimali ngeke lusetshenziselwe enye injongo ngaphandle kwalokhu:
a. ukukhomba futhi, lapho kufanele khona, ukubika ngokuxhashazwa kwemali noma ngezenzo zobuphekula;
b. ukunquma ukuthi kufanele isungulwe noma igcinwe i-akhawunti, noma ihlanganyele entengiselwano; noma
c. ukusiza isikhungo sezezimali ngokuhambisana nokwenza imisebenzi enjalo.
I-Watch Rapport izibophezele ekuhlinzekeni umuzwa omuhle kubo bonke abasebenzisi bethu futhi sihlose ukwenza lula ukufinyeleleka nokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu.
Sibheka ukufinyeleleka njengomzamo oqhubekayo futhi ngokuqhubekayo sifuna izixazululo ezizoletha zonke izindawo zewebhusayithi yethu ezingeni elifanayo lokufinyeleleka kwewebhu jikelele.
Uma unenkinga yokuthola noma yiluphi ulwazi olukule webhusayithi, sicela ukhululeke ukusishayela ku- (800) 571-7765 noma usithumele i-imeyili ku-help@watchrapport.com futhi sizosebenzisana nawe ukuhlinzeka ngolwazi, into noma ukuthengiselana ufuna indlela yokuxhumana efinyeleleka kuwe ehambisana nomthetho osebenzayo.